एवीडेमक्स भिडियो सम्पादनमा केन्द्रित एक उत्कृष्ट कार्यक्रम हो, एभिडिमक्स C / C ++ प्रोग्रामिंग भाषामा लेखिएको हुन्छ र GTK + र Qt ग्राफिक लाइब्रेरी प्रयोग गर्दछ, यो बहु-प्लेटफर्म अनुप्रयोग हो।
NodeJS वेब सर्वर उबन्टुमा तपाइँको स्क्रिप्टहरू परीक्षण गर्न
अर्को लेखमा हामी हेर्नेछौं कि कसरी आफ्नै NodeJs वेब सर्भर सिर्जना गर्ने हामी आफ्नै स्क्रिप्ट स्थानीय रूपमा टेस्ट गर्न, आधारमा उबुन्टु प्रयोग गरेर।
Coinmon, टर्मिनल बाट क्रिप्टो मुद्राको मूल्य जाँच गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी Coinmon मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस उपकरणले हामीलाई क्रिप्टो मुद्राको मूल्य थाहा पाउन दिन्छ जुन हामी बजारमा फेला पार्न सक्छौं, र यी सबै टर्मिनलबाट।
टाढा बाट तपाइँको कम्प्युटर को DWService को साथ ब्राउजर बाट पहुँच गर्नुहोस्
DwService एक सेवा हो जुन वेब दूर ब्राउजरको साधारण प्रयोगको साथ अन्य कम्प्युटरहरूको पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, यसलाई उत्कृष्ट विकल्प र पहिले नै ज्ञात व्यक्तिहरूको विकल्पको रूपमा।
उबन्टु १..१० मा LAMP (लिनक्स, अपाचे, MySQL र PHP) स्थापना गर्नुहोस्
शुभ प्रभात, यस पटक म तपाईंलाई ल्यामपी (लिनक्स, अपाचे, MySQL र PHP) कसरी स्थापना गर्ने भनेर देखाउने छ, खुला स्रोत उपकरणहरूको यो ठूलो सेट जुन हामीलाई हाम्रो कम्प्युटरमा वेब अनुप्रयोग चलाउन र होस्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
EasyJoin, इन्टरनेट बिना तपाईंको फोन र तपाईंको पीसी बीच फाईलहरू पठाउनुहोस्
अर्को लेख मा हामी EasyJoin मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस उपकरणले हामीलाई फाईलहरू, कुराकानीहरू, फोन कलहरू, एसएमएस पठाउन र हाम्रो फोन र पीसी बीचमा अधिक इन्टरनेटको आवश्यकता बिना साझेदारी गर्न अनुमति दिनेछ।
QMplay2, एक पूर्ण हल्का र बहु ​​प्लेटफार्म मल्टिमेडिया प्लेयर
अर्को लेखमा हामी QMplay2 मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो एक शानदार, हल्का र बहु ​​प्लेटफार्म मल्टिमेडिया प्लेयर हो जसको साथ हामी सबै प्रकारका फाईलहरू खेल्नका साथै वेब ब्राउजरको आवश्यकता बिना नै YouTube भिडियोहरू पनि हेर्न सक्छौं।
Pinfo, CLI उपकरण र रंग पृष्ठमा मानिस
अर्को लेखमा हामी पिनफोमा हेर्नेछौं। यो सीएलआई प्रोग्रामले हामीलाई म्यान पृष्ठहरू र सूचनाहरू राख्न मद्दत गर्दछ जुन अपरेटिंग सिस्टमले हामीलाई उपलब्ध गराउँदछ।
उल्टो गर्नुहोस्, उबुन्टुबाट तपाईंको क्यामेरा नियन्त्रण गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी एन्ट्याangleगललाई हेर्नेछौं। यो खुला स्रोत प्रोग्रामले उबन्टु डेस्कटपबाट हाम्रा क्यामेराहरू कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गर्न अनुमति दिनेछ।
उबुन्टु १..१० फेरि जनवरी ११ मा उपलब्ध हुनेछ
उबुन्टु १..१० स्थापना आईएसओ छवि फेरि सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ। यो जनवरी ११ मा फेरि उपलब्ध हुनेछ गाईडहरू र ट्यूटोरियलहरूको साथ समस्याहरू समाधान गर्नका लागि ...
उब्न्टुमा बिबिलेक्स, नि: शुल्क ग्रंथसूची प्रबन्धक
अर्को लेखमा हामी बिबफिलेक्समा एक नजर राख्नेछौं। यो प्रोग्राम उबन्टुको कुनै पनि संस्करणको लागि नि: शुल्क ग्रंथसूची प्रबन्धक हो। यो उत्तम होईन, तर यो शट पाउन लायक छ।
कागजातविहीन खोल्नुहोस्, स्क्यान गर्नुहोस्, व्यवस्थापन गर्नुहोस् र कागजात संग्रह गर्नुहोस् तपाईंको उबुन्टुमा
अर्को लेखमा हामी खुला कागजातविहीनलाई एक नजर राख्नेछौं। यो उपकरण हाम्रो उबन्टु अपरेटिंग प्रणालीको लागि शानदार कागजात प्रबन्धक हो।
Sayonara संगीत प्लेयर 1.0, उबन्टु को लागी एक शानदार संगीत प्लेयर
अर्को लेखमा हामी कसरी Sayonara संगीत प्लेयर १.० स्थापना गर्ने हेर्नेछौं। यो हाम्रो उबन्टु अपरेटिंग प्रणालीको लागि एक उत्कृष्ट संसाधन खपत क्यूटी संगीत प्लेयर हो।
तबलाओ, HTML टेबल्स सिर्जना गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका
अर्को लेखमा हामी तबलाओलाई हेर्नेछौं। यस उपकरणको साथ हामी उबुन्टुमा साधारण टेबुलमा HTML टेबुलहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछौं, तर शैली बिना, जुन हामी पछि हाम्रो HTML प्रोजेक्टहरूमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
लिनक्स टकसाल १ Tara लाई तारा भनिनेछ
लिनक्स मिन्ट १ Tara लाई तारा उपनाम दिइनेछ र उबुन्टु १.19.०16.04.3..18.04 मा आधारित हुने छैन तर उबुन्टु १.XNUMX.०XNUMX बायोनिक बीभरमा आधारित हुनेछ ...
EasyTag, Ubuntu मा तपाईंको संगीतको लागि ट्याग सम्पादक
अर्को लेखमा हामी EasyTAG मा एक नजर राख्नेछौं। यस सम्पादकको साथ हामी उबंटुमा हाम्रो संगीत लाइब्रेरीबाट व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा लेबलहरू सम्पादन गर्न सक्दछौं।
अनुवाद शेल, आदेश रेखाबाट कुनै पनि भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी अनुवाद शेलमा एक नजर राख्नेछौं। यस प्रोग्रामको साथ हामी उबन्टु कमाण्ड लाइनबाट कुनै पनि भाषामा अनुवाद गर्न सक्छौं।
Spotify पहिले नै स्न्याप ढाँचामा एक आधिकारिक अनुप्रयोग छ
आधिकारिक Spotify अनुप्रयोग उबन्टु को नयाँ संस्करणहरु मा स्थापित गर्न स्नैप प्रारूप मा पहिले नै एक संस्करण छ, धेरै समस्याहरु, विगत र भविष्य समाधान गर्ने चीज ...
फिंचभीपीएन, उबन्टु १..१० बाट ओपनभीपीएन मार्फत यस सेवा जडान गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी फिंचभीपीएन मा एक नजर राख्नेछौं। आउनुहोस् हामी कसरी उबन्टु १..१० प्रयोग गरेर ओपनभीपीएन प्रयोग गरेर यस वेब सेवामा जडान गर्ने।
Inxi, CLI हाम्रो टीमको बारेमा जानकारीको लागि
अर्को लेखमा हामी inxi मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो CLI उपकरण हो जुन हाम्रो उबन्टु टीमको हार्डवेयर र अन्य सुविधाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछ।
Darktable २.2.4.0.०, यस नयाँ संस्करणमा धेरै नयाँ सुविधाहरू
अर्को लेखमा हामी Darktable २.2.4.0.० लाई हेर्नेछौं। यो यस विगतका फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग प्रोग्रामको नयाँ संस्करण हो जुन यसका अघिल्ला संस्करणहरूको तुलनामा धेरै नयाँ सुविधाहरूसहित छ।
सम्पादक कोष्ठक १.११, उबन्टु १..१०, १.1.11.०17.10 मा स्नैप मार्फत स्थापना
अर्को लेखमा हामी उबन्टु १..१० र १.1.11.०17.10 मा कोष्ठक १.११ सम्पादक कसरी स्थापना गर्ने भनेर हेर्नेछौं। हामी सजीलै यो कोड सम्पादक यसको सम्बन्धित स्नैप प्याकेज मार्फत स्थापना गर्न सक्छौं।
ध्यान दिनुहोस् !! लेनोवो कम्प्युटरहरूमा उबुन्टु १..१० स्थापना नगर्नुहोस्
उबुन्टु १..१० ले निश्चित लेनोवो र एसर कम्प्युटरहरूमा गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउँछ, केहि कारणले उबन्टु टोलीले स्थापना छवि हटाएको छ ...
Speedtest-cli, टर्मिनलबाट तपाईंको जडानको ब्यान्डविथ नाप्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी स्पीडटेस्ट-क्लाइलाई हेर्नेछौं। यो उपयोगिताले टर्मिनलबाट हाम्रो ब्यान्डविथ नाप्न मद्दत गर्दछ।
यारोक म्यूजिक प्लेयर १.1.3.0.०, उबुन्टुको लागि एक संगीत प्लेयर
अर्को लेखमा हामी Yarock संगीत प्लेयर को नवीनतम संस्करण मा एक नजर लिन जाँदैछन्, जुन १.1.3.0.० छ। यो उबुन्टुको लागि साधारण प्लेयर हो।
उबुन्टु फोन पहिलो लिनक्स प्रणाली हुनेछ जुन एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरूसँग उपयुक्त छ
यूबीपोर्ट्स प्रोजेक्टले रिपोर्ट गरेको छ कि उनीहरूले उबन्टु फोनमा एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू ल्याउनमा चाँडै काम गर्नेछन्, सबैलाई धन्यवाद जुन एन्डबक्स प्रोजेक्टले यसलाई अनुमति दिन्छ
HeRMs, कमान लाईनबाट तपाईको कुकबुक प्रबन्ध गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी हेराईएमहरुमा एक नजर राख्नेछौं। यो एउटा कूकबुक हो जुन हामी कमान्ड लाइनबाट सजीलै प्रबन्ध गर्न सक्दछौं।
VLC R.० RC3.0, Ubuntu १ installation.०2, १..१० स्न्याप प्याकेजमार्फत स्थापना
यस लेखमा हामी VLC 3.0 RC2 को संस्करणमा एक नजर राख्नेछौं। यो एक शानदार बहु ​​प्लेटफार्म प्लेयर हो जुनसँग सबै कुराको पुन: उत्पादन गर्छ।
जाजानो, उबन्टुमा सजिलैसँग यो फ्रेमवर्क स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी जाj्गो ढाँचामा एक नजर राख्नेछौं। यस लेखमा हामी उबन्टु र यसका डेरिभेटिभहरूमा यसलाई कसरी सजिलै स्थापना गर्ने भनेर हेर्नेछौं।
Aureport, प्रणाली लगको सारांश उत्पन्न गर्दछ
अर्को लेखमा हामी aureport कमाण्डको आधारभूत प्रयोगमा एक नजर राख्नेछौं। यो कमाण्डले हामीलाई प्रणालीको बारेमा रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछ।
पिप, आधारभूतहरू, र पाइथन प्याकेज व्यवस्थापन
अर्को लेखमा हामी PIP मा एक नजर राख्नेछौं। यो पाइथनका लागि प्याकेज प्रबन्धक हो जुन हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ।
ओनिनशेयर, कुनै पनि आकारको फाइलहरू सुरक्षित रूपमा सेयर गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी OnionShare मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस उपकरणको साथ हामी फाईलहरू अज्ञात र सुरक्षित रूपमा TOR प्रयोग गरेर साझेदारी गर्न सक्दछौं।
बुका, उबन्टु १..१० का लागि क्यालिबरमा निःशुल्क विकल्प
बुका एक ईबुक म्यानेजर हो जुन उबुन्टु १..१० मा स्थापना गर्न सकिन्छ र क्यालिबर प्रयोग नगर्ने धेरैका लागि नि: शुल्क र आदर्श विकल्प हो ...
ओभरटाइम, CLI जसले हामीलाई विश्वको समय थाहा दिन अनुमति दिनेछ
अर्को लेखमा हामी ओभरटाइममा एक नजर राख्नेछौं। यो कमाण्ड लाइन ईन्टरफेसले हामीलाई विश्वको विभिन्न भागहरूमा समय जान्न मद्दत पुर्‍याउँछ
कम्युलोनिम्बस, पोडकास्ट सुन्नको लागि साधारण अनुप्रयोग
अर्को लेखमा हामी कम्युलोनिम्बसलाई हेर्नेछौं। यो उब्न्टुबाट हाम्रो मनपर्ने पोडकास्टहरू सुन्न एक ग्राहक हो।
MEGAsync, Ubuntu 17.10 मा MEGA ग्राहक स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी MEGAsync मा एक नजर राख्नेछौं। यो हाम्रो उबन्टुको लागि मेगा फाईल सिंक क्लाइन्ट हो।
ब्लू ग्रिफन, अर्को WYSIWYG वेब पृष्ठ सम्पादक
अर्को लेखमा हामी निलोग्रिफोनमा एक नजर राख्नेछौं। यो WYSIWYG वेब पृष्ठ सम्पादक हो जुन हामी सरल वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं
OMF (हे मेरो फिश), पूर्ण रूपमा तपाईको फिशेललाई अनुकूलन गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी OMF (हे मेरो फिश) मा एक नजर राख्नेछौं। यस परियोजनाले हामीलाई फिशशेल पूर्ण रूपमा अनुकूलित गर्न अनुमति दिनेछ।
कसरी जीनोममा केडीई कनेक्ट स्थापना गर्ने
Ubuntu १..१० र उबुन्टुमा GNome संग डेस्कटपको रूपमा कसरी जडान गर्ने केडीई कनेक्ट अनुप्रयोग सही तरीकाले स्थापना गर्ने र चलाउने बारेमा सानो ट्यूटोरियल।
फाइलहरू गुप्तिकरण गर्न र डिक्रिप्ट गर्नको लागि धेरै मनमोहक सीएलआई उपयोगिता
अर्को लेखमा हामी टोपलिपमा हेर्नेछौं। यस CLI उपयोगिता फाइल ईन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्न हामीलाई मद्दत गर्दछ
बास-इन्सुल्टर, तपाईंको प्रणालीले प्रयोगकर्तालाई अपमान गर्दछ कमाण्ड गलत हिज्जे गरेर
अर्को लेखमा हामी बास-ईन्सुल्टरलाई हेर्नेछौं। यस स्क्रिप्टले प्रयोगकर्तालाई अपमान गर्दछ जब उसले टर्मिनलमा गलत तरिकाले आदेश टाइप गर्दछ
उबुन्टु १..१० मा कसरी ब्याट्री प्रतिशत देखाउने
Ubuntu १..१० को Gnome को माथिल्लो पट्टीमा ब्याट्री प्रतिशत कसरी देखाउने बारेमा सानो ट्यूटोरियल, उबंटुको पछिल्लो स्थिर संस्करण ...
हुनसक्छ, यसले हामीलाई आदेश दिन्छ कि प्रोग्रामले कार्यान्वयन गर्नु अघि के गर्छ
अर्को लेखमा हामी सायद एक नजर राख्नेछौं। यस उपकरणले हामीलाई थाहा दिन्छ कि कार्यान्वयन गर्नु अघि कमाण्ड वा प्रोग्रामले के गर्ने छ।
पेन्सिल, मोडेल र प्रोटोटाइपहरू सजीलै बनाउनुहोस्
अर्को लेखमा हामी पेन्सिललाई हेर्नेछौं। यस अनुप्रयोगको साथ हामी सजिलैसँग उबन्टुमा प्रोटोटाइप र मोडेलहरू सिर्जना गर्न सक्छौं।
AmzSear, आदेश लाइन बाट अमेजन मा उत्पादनहरु को लागी खोज्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी AmzSear मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो एउटा सानो स्क्रिप्ट हो जसले हामीलाई टर्मिनलबाट Amazon मा उत्पादनहरू खोजी गर्न अनुमति दिनेछ।
स्पाइडर, पाइथनको लागि एक शक्तिशाली अन्तरक्रियात्मक विकास वातावरण
अर्को लेखमा हामी स्पाइडरमा एक नजर राख्नेछौं। यो एक शक्तिशाली आईडीई हो जुनसँग हामी पायथनमा हाम्रा कोडहरू विकास गर्न सक्दछौं।
क्यटग्राम, टेलिग्रामको लागि एक अनधिकृत डेस्कटप ग्राहक
अर्को लेखमा हामी क्यूटग्राममा एक नजर राख्नेछौं। यो बहु विकल्पहरूको साथ टेलीग्रामको लागि एक अनधिकृत डेस्कटप ग्राहक हो।
माछा, एक स्मार्ट र प्रयोग गर्न सजिलो कमाण्ड लाइन
अर्को लेखमा हामी माछालाई हेर्नेछौं। एक बुद्धिमान कमांड लाइन जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ र धेरै सम्भावनाहरू सहित।
मेडली टेक्स्ट, स्टाइलको साथ प्रोग्रामिंग नोटहरू लिनुहोस्
अर्को लेखमा हामी मेडलेटेक्स्टमा हेर्नेछौं। यो समय तालिका को बारे मा स्टाइलिश नोट-लिने अनुप्रयोग हो।
FileZilla 3.29.0.२ .XNUMX.०, फ्ल्याटप्याक मार्फत पछिल्लो संस्करण स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी फाईलजिला 3.29..२। लाई हेर्नेछौं। हामी कसरी फ्ल्याटप्याक प्याकेज प्रयोग गरी यो ग्राहकको नयाँ संस्करण स्थापना गर्ने भनेर हेर्न जाँदैछौं।
Undistract-me, तपाईं टर्मिनल कमान्ड समाप्त गरेको बेलामा एउटा सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ
अर्को लेखमा हामी Undistract-me मा हेर्नेछौं। यो स्क्रिप्टले सूचना प्रदर्शन गर्दछ जब आदेशको कार्यान्वयन पूरा हुन्छ।
लाइट तालिका, एक अनुकूलन योग्य र खुला स्रोत आईडीई
अर्को लेखमा हामी प्रकाश तालिकामा एक नजर राख्नेछौं। यो अर्को अनुकूलन आईडीई अनुकूलन योग्य र खुला स्रोत हो।
डीवीडीएसटाइलर, पेशेवर डिभिडिहरू सिर्जना गर्नका लागि अनुप्रयोग
अर्को लेखमा हामी डीभीडीएसटाईलरलाई हेर्नेछौं। यस उपकरणको साथ हामी हाम्रो उबन्टुमा व्यावसायिक डीभीडीहरू सिर्जना गर्न सक्छौं।
LosslessCut, तपाइँको भिडियो को भागहरु काट्न एक सरल उपकरण
अर्को लेखमा हामी LossLessCut मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो अत्यन्त सरल भिडियो सम्पादक हो जसले हामीलाई आधारभूत चीजहरू गर्न अनुमति दिनेछ।
कसरी हाम्रो उबन्टु डेस्कटपमा ट्रेलो छ
सस्तो ट्यूटोरियल कसरी उबुन्टु डेस्कटपमा सीधा पहुँच गर्न सकिन्छ ट्रेलो अनुप्रयोगमा र यसैले हाम्रो पीसीमा उत्पादकता सुधार गर्न ...
Ddgr, DuckDuckGo मा उबन्टु टर्मिनलबाट खोजी गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी ddgr मा एक नजर राख्नेछौं। यस कार्यक्रमले हामीलाई डक डकगोमा हाम्रो टर्मिनलबाट खोजी गर्न अनुमति दिनेछ।
ब्रिस्क मेनू, क्लासिक मेनूको विकल्प
ब्रिस्क मेनू एक मेनू अनुप्रयोग हो जुन हामीलाई पुरानो विन्डोज स्टार्ट मेनू सम्झन मद्दत गर्दछ। विन्डोजबाट आउनेहरूको लागि एक आदर्श मेनू ...
इनबॉक्सर, उबुन्टु १..१० को लागि एक अनौपचारिक Gmail ग्राहक
अर्को लेखमा हामी इनबक्सरमा एक नजर राख्नेछौं। यो हाम्रो उबन्टु १..१० को लागि अनौपचारिक Gmail डेस्कटप ग्राहक हो।
बशब, तपाईको टर्मिनलको ईतिहास कहिँ पनि पहुँच गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी बाशबलाई हेर्नेछौं। यस उपकरणको साथ हामी कहिँ पनि हाम्रो टर्मिनलको ईतिहास पहुँच गर्न सक्दछौं।
लिनक्स मिन्ट १.18.2.२ लाई लिनक्स मिन्ट १.18.3..XNUMX मा अपग्रेड गर्ने
अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरूले लिनक्स टकसाल प्रयोग गर्दै छन् र यसको मतलब यो हो कि धेरै व्यक्तिहरू जो ...
एन्ड्रोइड फाइल ट्रान्सफर, एन्ड्रोइड र उबुन्टु १..१० बीच फाईलहरू ट्रान्सफर गर्नुहोस्
यो लेखमा हामी Gnu / लिनक्सको लागि एन्ड्रोइड फाइल ट्रान्सफरमा एक नजर राख्नेछौं। हामी एन्ड्रोइड र हाम्रो उबन्टु बीच फाईल र फोल्डरहरू हस्तान्तरण गर्न सक्छौं।
Bu उब्न्टु १..१० को लागि माइक्रोसफ्ट प्रकाशकको ​​लागि free नि: शुल्क विकल्पहरू
हामी तीन नि: शुल्क उपकरणहरू प्रस्तुत गर्दछौं जुन हामी उबन्टु १..१० मा स्थापना गर्न सक्दछौं र त्यो माइक्रोसफ्ट प्रकाशकको ​​विकल्प हो, एकल विकल्प हो ...
Mkusb, क्षतिग्रस्त USB ड्राइभहरू वा कार्डहरूलाई उनीहरूको मूल अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी mkusb मा एक नजर राख्नेछौं। यो अनुप्रयोगको साथ हामी बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्न सक्दछौं र हाम्रो कलमलाई यसको मूल मानमा पुनःस्थापित गर्न सक्दछ।
केंचुआ जिम १ र २ आधिकारिक रूपमा उबन्टुमा आइपुग्छन्
प्रख्यात भिडियो गेम गाथा अर्थ्चुम जिम अन्ततः उबुन्टु र Gnu / लिनक्स मा आइपुग्छ। यस पटक GoG भिडियो खेल प्लेटफर्मलाई धन्यवाद ...
Qmmp प्लेयर यसको संस्करण १.०.० मा अपडेट गरिएको छ
यस पटक म तपाईंलाई Qmmp को बारे मा बताउन जाँदैछु जुन एक बहु प्लेटफार्म अडियो प्लेयर जुन C ++ मा लेखिएको थियो, यससँग Winamp सँग मिल्दोजुल्दो ईन्टरफेस छ।
जिनोम बिस्तारहरू, उबन्टु १..१० का लागि केहि रोचक अनुप्रयोगहरू
अर्को लेखमा हामी हाम्रो उबन्टु १..१० लाई अधिक प्रकार्यहरू प्रदान गर्न केही जिनोम विस्तारहरूमा ध्यान दिनेछौं।
एक्स एन कन्वर्ट, उबन्टु १..१० मा बहु छविहरू पुनःचर्चन र प्रक्रिया गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी xnConvers मा एक नजर लिने छौं। एकै समयमा धेरै छविहरू पुन: प्रवर्तन गर्दा यो कार्यक्रम हाम्रो लागि धेरै उपयोगी छ।
devRantron, devRant समुदाय को लागी अनधिकृत डेस्कटप ग्राहक
अर्को लेखमा हामी devRantron मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो देवRant नेटवर्क को लागी एक अनौपचारिक डेस्कटप ग्राहक हो।
सुपरटक्सकार्टले यसको अन्तिम संस्करण ०.0.9.3..XNUMX प्रकाशित गर्दछ
यस नयाँ किस्तमा सुपरटक्सकार्ट यसको अन्तिम स्थिर संस्करण ०.0.9.3..XNUMX छ हामी एक नयाँ नयाँ प्रकार्य पाउँछौं, जुन रेकर्ड गर्ने क्षमता हो।
क्यानोनिकल जान्न चाहन्छ कि तपाइँ कसरी तपाइँको MIR सर्वर हुन चाहानुहुन्छ
एमआईआर विकासकर्ताहरूले उनीहरूको काममा प्रगति गर्न जारी राख्छन् र अब उनीहरू उनीहरूको ग्राफिकल सर्भरको लागि के प्रकारहरू वा मोड्युलहरू चाहिन्छ भनेर जान्न चाहन्छन् ...
qBittorrent 4.0, उबंटुको लागि यो टोरेन्ट ग्राहकको नयाँ संस्करण
अर्को लेखमा हामी कसरी हामी उबन्टुमा सजिलै र चाँडो qBittorrent .4.0.1.०.१ स्थापना गर्न सक्दछौं भनेर एक झलक लिनेछौं।
उब्न्टु १..१० मा कसरी एडीबी र फास्टबुट स्थापना गर्ने
हाम्रो उबंटु १..१० मा एडीबी र फास्टबुट कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल कुनै पनि मोबाइलमा एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू विकास र स्थापना गर्न सक्षम हुन ...
Wpm, उबन्टु टर्मिनलबाट तपाईंको लेखन गति नाप्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी WP मा एक नजर राख्नेछौं। यो सानो प्रोग्रामले उबन्टुमा हाम्रो लेख्ने गति मापन गर्न र सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
LXLE १.16.04.3.०XNUMX..XNUMX, हल्का वजन वितरणको नयाँ संस्करण
LXLE १.16.04.3.०XNUMX. यस हल्का वितरणको नयाँ संस्करण हो जुन उबन्टु Xenial Xerus को आधार वितरणको रूपमा प्रयोग गर्दछ र त्यसले ठूला परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्‍यो ...
कुबन्टुसँग अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न पूर्वनिर्धारित ढाँचाको रूपमा स्न्याप ढाँचा हुन सक्छ
स्न्याप ढाँचा विस्तार गर्न जारी छ, अब केडीई प्रोजेक्ट र प्लाज्मामा पुग्न। यसैले, केडीई निन र कुबन्टु यस पूर्वनिर्धारित ढाँचाको लागि अर्को हुनेछ ...
उबुन्टु युनिटी रीमिक्स, नयाँ आधिकारिक स्वादको नाम?
स्पष्ट रूपमा एकतामा आधारित उबन्टु को नयाँ आधिकारिक स्वाद पहिले भन्दा धेरै नजिक छ। उबुन्टु युनिटी रीमिक्स यस वितरणको अस्थायी नाम हो ...
हाम्रो उबन्टु १..१० मा कसरी उबन्टु १.18.04.०17.10 आइकनहरू छन्
कसरी स्थापना गर्ने र उबन्टु १..१० मा नयाँ उबन्टु १.17.10.०18.04 आइकन प्याकमा आईसोनहरू स्थापना गर्ने बारे सानो ट्यूटोरियल।
Ubuntu १ 16.04.०XNUMX अपडेट कसरी गर्ने
सानो युक्ति हाम्रो उबन्टु १.16.04.०XNUMX स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्न, ताकि हामीसँग सुरक्षा समस्या वा पुरानो कार्यक्रम छैन ...
मोजिला फायरफक्स 57 XNUMX, नयाँ संस्करण जसले हाम्रो उबन्टुको सञ्चालनमा सुधार ल्याउँछ
मोजिला फायरफक्स now 57 अब उपलब्ध छ। मोजिलाको वेब ब्राउजरको नयाँ संस्करण अब उबन्टुमा स्थापना गर्न सकिन्छ र यसैले वेब ब्राउजर ...
Spotify विज्ञापन हटाउनुहोस्, उबन्टु १..१० मा एक साधारण तरीकाले
अर्को लेखमा हामी उबन्टु १..१० मा हाम्रो स्पोटिफाई क्लाइन्टबाट विज्ञापन कसरी हटाउने भन्ने बारेमा एक अध्ययन लिनेछौं।
पापिस, कमाण्ड लाइन आधारित ग्रंथसूची र कागजात प्रबन्धक
अर्को लेखमा हामी प्यापिसलाई हेर्नेछौं। यो उपकरण आदेश रेखा को लागी एक ग्रंथसूची र कागजात प्रबन्धक हो।
एन्ड्रोइड स्टुडियो 3.0.,, उबन्टु १..१० मा पीपीएबाट स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी हाम्रो उबन्टु १..१० मा पीपीएबाट एन्ड्रोइड स्टुडियो install.० कसरी स्थापना गर्न सक्दछौं भनेर एक झलक लिनेछौं।
Cli.Fyi, IP ठेगानाहरू, ईमेलहरू र अधिकमा द्रुत जानकारी
अर्को लेखमा हामी Cli.Fyi मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस उपकरणले हामीलाई कन्सोलबाट बिभिन्न डाटामा द्रुत जानकारीको अनुमति दिन्छ।
उब्न्टु १.18.04.०XNUMX को पहिलो दैनिक समाचारहरू अब उपलब्ध छन्
उबुन्टु १.18.04.०XNUMX विकास टोलीले आगामी उबन्टु स्थिर रिलीजको पहिलो दैनिक संस्करणहरू जारी गरेको छ। एक संस्करण जुन अप्रिलमा आइपुग्नेछ
ओप्रोफाइल, उबन्टुमा प्रदर्शनको सांख्यिकीय प्रोफाइल उत्पन्न गर्दछ
अर्को लेखमा हामी ओप्रोफाइलमा एक नजर राख्नेछौं। यस सफ्टवेयरको साथ हामी हाम्रो उबन्टु प्रणालीको तथ्याical्कगत प्रोफाइल उत्पन्न गर्न सक्छौं।
एनबीए गो, उबन्टु टर्मिनलबाट खेलहरू अनुसरण गर्नुहोस्
अर्को लेख मा हामी एनबीए गो मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस टर्मिनल कार्यक्रमले हामीलाई यस लिगमा खेलहरू टाढा राख्न अनुमति दिनेछ।
श्रव्यता २.२, सब भन्दा प्रसिद्ध ध्वनि कार्यक्रम को नयाँ अपडेट
अडेसिटी २.२ भनेको Gnu विश्वमा सबैभन्दा प्रख्यात र लोकप्रिय ध्वनी सम्पादकको नयाँ संस्करण हो। हामी तपाइँलाई नयाँ लेराउने केहि छ र उबन्टुमा यसलाई कसरी स्थापना गर्ने भनेर हामी तपाइँलाई बताउँछौं
उबंटु डेस्कटपबाट सिग्नल, सुरक्षित सन्देश सेवा
अर्को लेखमा हामी सिग्नललाई हेर्नेछौं। यो उबुन्टु डेस्कटपको लागि इलेक्ट्रोनमा बनाइएको सुरक्षित सन्देश सेवा हो।
लुसिडर, उबुन्टुको लागि एक सरल र कार्यात्मक ईबुक पाठक
लुसिडोर एक न्यूनतम ईबुक पाठक हो जसले हामीलाई उबन्टुमा इपब ढाँचामा ईबुकहरू पढ्न र ओपीडीएस ढाँचामा पुस्तकालयहरू पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ ...
Prestashop, यसलाई उबन्टु १..१० मा Xampp को साथ सजीलो स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी देख्नेछौं कि Prestashop स्थानीय रूपमा स्थापना गर्ने, Xampp प्रयोग गरेर। यो सबै उबन्टु १17.10.१० प्रणालीमा।
एनाकोन्डा, Ubuntu १..१० देखि पाइथनको साथ डाटा विज्ञानको लागि सूट
अर्को लेखमा हामी एनाकोंडामा एक नजर राख्नेछौं। उबुन्टु १..१० पछि यो पाइथन डाटा साइन्स हो।
Ubuntu प्रदर्शन कसरी सुधार गर्ने Z Zwap लाई धन्यवाद
हामीसँग उबन्टुमा ZSwap छ कि छैन र सानो उमेरमा हाम्रो उबंटुको प्रदर्शन सुधार गर्न यसलाई सक्रिय बनाइएको छैन भने के गर्ने सानो मार्गनिर्देशन।
MuseScore, स्नाप-मा कम्पोजिiting र संगीत नोटेशन सफ्टवेयर
अर्को लेखमा हामी म्यूजस्कोरलाई हेर्नेछौं। यो कार्यक्रमले हामीलाई उबन्टुमा रचना र संगीत संकेतको साथ मद्दत गर्दछ।
उबन्टु १..१० मा हर्थथस्टोन कसरी स्थापना गर्ने
हाम्रो Ubuntu १..१० मा Hearthstone कसरी स्थापना गर्ने र खेल्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल। विन्डोजमा पछाडि जानुभएको बिना सजीलै खेल खेल्नको लागि गाईड
Gnu / Linux मा खेलहरू खेल्दै, नौसिखिए प्रयोगकर्ताहरूका लागि सजिलो ट्यूटोरियल
अर्को लेखमा हामी हाम्रो उबन्टु अपरेटिंग प्रणालीमा खेल्नको लागि धेरै खेलहरू लिन विभिन्न तरिकाहरूमा हेर्नेछौं।
RipMe, लोकप्रिय वेबसाइटहरूबाट छवि एल्बमहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी RipMe मा एक नजर राख्नेछौं। यो जाभा प्रोग्रामले हामीलाई लोकप्रिय वेबसाइटहरूबाट छवि एल्बमहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिनेछ।
क्यूबिक, कस्टम उबन्टु आईएसओ र डेरिभेटिभहरू सिर्जना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी क्यूबिकलाई हेर्नेछौं। यस प्रोग्रामको साथ हामी हाम्रो उबन्टुको कस्टम आईएसओ छविहरू सिर्जना गर्न सक्छौं।
VirtualBox संस्करण .5.2.२ आधिकारिक रूपमा जारी गरियो
VirtualBox को यो नयाँ संस्करण धेरै परिवर्तन र सुविधाहरूसँग आउँदछ जुन धेरैलाई चासो लाग्न सक्छ, यो नयाँ शाखासँग मेल खान्छ।
XAMPP 7.1.10, उबन्टु १ server.१० मा सजिलैसँग यो सर्वर स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी हामी कसरी एक सरल तरीकाले हाम्रो उबन्टु १..१० प्रणालीमा XAMPP .7.1.10.१.१० स्थापना गर्न सक्दछौं भनेर एक झलक लिनेछौं।
कुबन्टु विकासकर्ताहरूले प्लाज्मा 5.8.8..XNUMX.। परीक्षण गर्न उनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूलाई मद्दतको लागि सोध्छन्
कुबन्टु विकासकर्ताहरूले उब्बन्टु १ 5.8.8.०16.04 मा प्लाज्मा XNUMX..XNUMX सम्बन्धित प्याकेजहरू र अनुप्रयोगहरू परीक्षण गर्न उनीहरूको समुदायलाई सहयोगको लागि सोधिरहेका छन् ...
उबुन्टु १.18.04.०XNUMX एलटीएस विकास आधिकारिक रूपमा सुरू हुन्छ
यस सप्ताहन्तमा उबन्टु १.18.04.०XNUMX एलटीएसको विकास आधिकारिक रूपमा सुरू भएको छ, उबन्टुको अर्को आधिकारिक र स्थिर संस्करण जुन अप्रिलमा जारी हुनेछ ...
एनिपास्ट, टर्मिनलबाट स्वचालित रूपमा सबै प्रकारका फाईलहरू अपलोड गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी कसरी उबन्टु टर्मिनलबाट फाईलहरू साझेदारी गर्न एनिप्यास्ट प्रयोग गर्न सक्छौं भन्नेमा एक नजर राख्नेछौं।
उबंटु १..१० मा एडोब क्रिएटिभ क्लाउड कसरी स्थापना गर्ने
हाम्रो उबन्टु १..१० मा एडोब क्रिएटिभ क्लाउड कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल। एक स्क्रिप्टलाई एक सरल र छिटो प्रक्रिया धन्यवाद ...
कसरी उबन्टु १..१० मा वेल्याण्डबाट Xorg मा जान
सानो ट्यूटोरियल कसरी Xorg मा एक ग्राफिकल सर्वर को रूप मा फिर्ता र वेल्याण्ड एक तरफ उबन्टु 17.10 मा छोड्नुहोस् ताकि निश्चित अनुप्रयोगहरु काम ...
विन्डोज एरो फ्लिप थ्रीडी, उबन्टु १..१० मा Alt + ट्याब टास्क स्विचर
अर्को लेखमा हामी कसरी हाम्रो उबन्टु १..१० मा Alt + Tab को साथ कार्यहरू स्विच गर्ने क्रममा विन्डोज एरो फ्लिप थ्रीडी कसरी सक्रिय गर्ने भन्ने बारे एक नजर लिनेछौं।
शटलवर्थ वर्णन गर्दछ किन उबन्टुले जीनोमको लागि एकता छोडे
क्यानोनिकल र उबन्टुका नेता, मार्क शटलवर्थले उबुन्टुले नोनोमको लागि एकता परिवर्तन गर्नुको कारण र एकता बिर्सनुको कारण वर्णन गरेका छन् ...
Ubuntu १..१० मा 'न्यूनतम, अधिकतम, बन्द' विन्डो बटनहरू बाँयामा सार्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी उबन्टु १..१० विन्डो बटन GSettings र Dconf को साथ कसरी सार्ने भन्ने बारेमा एक अध्ययन लिनेछौं।
उबन्टु १ 18.04.०XNUMX लाई "बायोनिक बीभर" भनिएको छ, उबन्टु कामदारलाई श्रद्धांजलि
उबन्टु १.18.04.०XNUMX को मस्कट र उपनाम बायोनिक बीभर हुनेछ, मार्क शटलवर्थले संकेत गरे अनुसार उसको व्यक्तिगत पृष्ठमा, अर्को संस्करण एलटीएस हुनेछ ...
उबुन्टु MATE १..१० मा कसरी एकता राख्ने
Ubuntu MATE १..१० मा कसरी एकता राख्ने भन्ने बारेको सानो ट्यूटोरियल, एक अनुकूलन जसले हामीलाई उबन्टु डेस्कटप सम्झन अनुमति दिनेछ ...
Cockpit, नियन्त्रण र वेब ब्राउजर को माध्यम बाट आफ्नो नेटवर्क को प्रबंधन
अर्को लेखमा हामी ककपिटमा हेर्नेछौं। यस प्रोग्रामको साथ हामी ब्राउजरबाट हाम्रो कम्प्युटरहरूको नेटवर्क सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न सक्दछौं।
कसरी हाम्रो उबन्टु १..१० बाट युनिटी हटाउने
कसरी हाम्रो युबुटु १ Un.१० बाट युनिटी हटाउने बारेमा सानो ट्यूटोरियल अपरेटि system सिस्टमलाई रिसाएर वा हाम्रो कार्यको लागि असक्षम नगरीकन ...
iWant, उबन्टु टर्मिनलबाट फायरहरू पियर-टु-पियर साझा गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी iWant मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो प्रोग्राम हाम्रो काममा आउँदछ जब यो हाम्रो नेटवर्कमा फाईलहरू साझेदारी गर्न आउँदछ।
गुगल फन्टहरू, तपाई सबै उबन्टुमा टाइपग्याचरको साथ स्थापना गर्नुहुन्छ
अर्को लेखमा हामी टाइपग्याचरमा एक नजर राख्नेछौं। यस कार्यक्रमले उबन्टुमा गुगल फन्टहरू स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ।
OMD, उबन्टुको लागि पूर्ण नेटवर्क निगरानी उपकरण
अर्को लेखमा हामी ओएमडीमा एक नजर राख्नेछौं। यस सफ्टवेयरको साथ हामी हाम्रो उबन्टु प्रणालीबाट हाम्रो नेटवर्क मोनिटर गर्न सक्छौं।
अघिल्लो संस्करणबाट उबुन्टु १..१० मा कसरी अपग्रेड गर्ने
हामीसँग उबन्टुको नवीनतम संस्करणबाट उबन्टु १..१० कसरी अपग्रेड गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल, साथै उबुन्टु एलटीएसबाट सर्दै ...
उबुन्टु १..१० जारी भइसकेको छ र डाउनलोडका लागि उपलब्ध छ
यस नयाँ संस्करणमा हामीसँग Gnome Shell 3.26 यसको सबै सुविधाहरू छन् जुन वितरणको यो नयाँ संस्करणको साथ आउँदछ।
InstantNews, कमान्ड लाइनबाट तत्काल समाचार प्राप्त गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी InstantNews मा हेर्नेछौं। कमाण्ड लाइनका लागि यो उपयोगिताले हामीलाई समाचारहरू पढ्ने अवसर दिन्छ।
इलेमेनेटरी ओएस जुनोले स्न्याप प्याकेजहरू प्रयोग गर्नेछ
एलिमेन्टरी ओएसको अर्को संस्करण उबन्टु १.18.04.०XNUMX मा आधारित हुनेछ र केहि ठूला परिवर्तनहरू हुनेछन्। यो संस्करण एलिमेन्टरी ओएस जुनो भनिनेछ ...
GitBook, Ubuntu बाट तपाईंको प्रोजेक्टहरूको लागि कागजात लेख्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी GitBook मा एक नजर लिनेछौं। एक सम्पादक जसले हामीलाई डेस्कटपबाट हाम्रा प्रोजेक्टहरूको कागजात सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ
SupertuxKart, तपाइँको उबुन्टुमा यो क्लासिक खेल प्रयास गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी सुपरटक्सकर्टमा एक नजर राख्नेछौं। यो Gnu / लिनक्स प्रणालीमा एक क्लासिक खेल हो जुन प्रसिद्ध सुपरमिरियो कार्टको अनुकरण गर्दछ।
Ocenaudio, यो सरल र धेरै कार्यात्मक अडियो सम्पादक प्रयास गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी ओसेनाउडियोमा एक नजर राख्नेछौं। यो हाम्रो उबन्टु प्रणालीको लागि एक सरल तर शक्तिशाली अडियो सम्पादक हो।
sView, Ubuntu मा यो स्टेरियोस्कोपिक छवि र भिडियो दर्शक स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी sView मा एक नजर लिन जाँदैछन्। हामी यस त्रिविम चित्र र उबन्टुमा पीपीए प्रयोग गरेर भिडियो दर्शक स्थापना गर्न सक्छौं।
फ्रीक्याड, थ्रीडी मोडलर र उबन्टुका लागि सीएडी सफ्टवेयर
अर्को लेखमा हामी फ्रीक्याडमा एक नजर राख्नेछौं। यो एक dd र २d मोडलर हो जुन हाम्रो लागि मेकानिकल ईन्जिनियरि and र उत्पादन डिजाइनमा उपयोगी छ।
कफि, मौसम र ताजा समाचारहरू जान्नको लागि एउटा अनुप्रयोग
अर्को लेखमा हामी कफिलाई हेर्नेछौं। यो अनुप्रयोगले हामीलाई मौसम पूर्वानुमान र नवीनतम समाचार जान्न अनुमति दिनेछ।
मेलस्प्रि our, हाम्रो उबन्टुको लागि राम्रो मेल क्लाइन्ट
अर्को लेखमा हामी मेलस्प्रि aमा एक नजर राख्नेछौं। यो हाम्रो उबन्टुमा Nylas मेल ग्राहकलाई राम्रो विकल्प हो।
DebOrphan र GtkOrphan, प्याकेजहरू हटाउनुहोस् जुन तपाईंको उबन्टुले प्रयोग गर्दैन
अर्को लेखमा हामी देब ओरफान र GtkOrphan मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यी सुविधाहरूले हामीलाई हाम्रो उबन्टुबाट अनाथ प्याकेजहरू हटाउन अनुमति दिनेछ।
Transfer.sh, टर्मिनलबाट सजिलै फाईलहरू साझेदारी गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी Transfer.sh मा हेर्नुहोस्। यो उपयोगिताले हामीलाई फाइलहरू जो कोहीसँग टर्मिनल मार्फत साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ
Asciinema, रेकर्ड र आफ्नो टर्मिनल सत्र साझा गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी ASCIINEMA लाई हेर्नेछौं। तपाईको टर्मिनल सत्रहरू रेकर्ड गर्न र तपाईलाई जो कोहीले पनि साझेदारी गर्न यो अनुप्रयोग हो।
नेटुटिलस-लिनक्स, नेटवर्क प्रदर्शनको लागि टूलकिट
अर्को लेखमा हामी नेटुटिल्स-लिनक्समा एक नजर राख्नेछौं। यो हाम्रो नेटवर्क सुधार गर्न वा नियन्त्रण गर्न उपकरणहरूको एक सेट हो।
उबन्टु र Kliqqi को साथ एक सामाजिक नेटवर्क कसरी बनाउने
हाम्रो उबन्टु सर्भरमा Kliqqi कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे सानो मार्गनिर्देशन, एक CMS जसले हामीलाई हाम्रो वेब स्पेसमा सानो सामाजिक नेटवर्क प्रदान गर्न अनुमति दिनेछ।
जिम, उबुन्टु डेस्कटपबाट आफ्नै विकी सिर्जना गर्नुहोस्
यस लेखमा हामी जिमलाई हेर्नेछौं। यस सफ्टवेयरको साथ हामी उबुन्टु डेस्कटपबाट आफ्नै विकी सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछौं।
DCRaw, कच्चा छविहरूलाई उबन्टुबाट मानक ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी DCRaw मा एक नजर लिन जाँदैछौं। यस कार्यक्रमले हामीलाई कच्चा छविहरू मानक ढाँचा (टिफ र पीपीएम) मा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ।
आणविक संगीत प्लेयर, यस संगीत स्ट्रिमि player प्लेयर स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी आणविक एक झलक लिनेछौं। यस संगीत स्ट्रिमिंग प्लेयरले हामीलाई बहु स्रोतहरूबाट संगीत सुन्न अनुमति दिनेछ।
कसरी पहिलो स्थापना गर्न उबन्टु डेस्कटप पुन: स्थापना गर्ने
सफ्ट स्थापना नगरीकन कसरी हाम्रो उबन्टु डेस्कटप पुन: भण्डारण गर्ने साना ट्यूटोरियल। उपयोगी जब नयाँ संस्करण आउँछ ...
Geary 0.12, उबन्टुमा यो मेल ग्राहकको नयाँ संस्करण स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी गेरीमा एक नजर राख्नेछौं। यो मेल ग्राहक संस्करण ०.२२ मा पुगेको छ र अब हामी यसलाई सजिलैसँग उबन्टुमा स्थापना गर्न सक्छौं।
इंटेलिज IDEA, IPA स्थापना गर्नुहोस् IPA बाट जाभासँग विकास गर्न
अर्को लेखमा हामी इन्टेलिज IDEA लाई हेर्नेछौं। यो IDE हो जुन जाभा र उबन्टुमा अन्य भाषाहरूका साथ परियोजनाहरू विकास गर्न सक्षम हुन।
क्यान्टाटा MPD, PPA वा .deb प्याकेजबाट यो संगीत प्लेयर स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी क्यान्टाटा MPD लाई हेर्नेछौं। यो एक अडियो प्लेयर हो जसले हाम्रो उबन्टु प्रणालीको लागि थोरै स्रोतहरू खपत गर्दछ।
फोटोफ्लो, उबन्टुमा RAW छविहरूसँग काम गर्दछ
अर्को लेखमा हामी फोटोफ्लोमा हेर्नेछौं। यो कार्यक्रमले हामीलाई हाम्रो उबन्टु प्रणालीबाट RA छविहरूसँग काम गर्न अनुमति दिनेछ।
कसरी हाम्रो उबन्टुमा डबल प्रमाणीकरण स्थापना गर्ने
हाम्रो उबन्टुमा स्मार्टफोन र साधारण गुगल अनुप्रयोगले सहयोग गरेको डबल प्रमाणीकरण प्रणाली कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल।
लुब्रस, उबुन्टुसँग सबै भन्दा धेरै खेलाडीहरूको लागि उपकरण
लुटरिस एक उपकरण हो जुन हाम्रो उबन्टु वा कुनै Gnu / लिनक्स प्रणालीको लागि निःशुल्क खेलहरू स्थापना गर्न र प्राप्त गर्न सजिलो बनाउनको लागि प्रयास गर्दछ।
ट्विटर क्लाइ, कमान्ड लाइनका लागि ट्विटर ग्राहक
अर्को लेखमा हामी ट्विटर CLI मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो हाम्रो उबन्टु कमाण्ड लाइन को लागी एक ट्विटर ग्राहक हो।
Eolie, स्थापना वा GNome को लागी यो वेब ब्राउजर को कोड कम्पाइल
अर्को लेखमा हामी Eolie मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो एक जिनोम डेस्कटप वेब ब्राउजर हो जुन हामी सजीलै स्थापना गर्न सक्छौं।
PyCharm, PPA बाट पाइथनको लागि यो IDE स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी पायकर्ममा एक नजर राख्नेछौं। पाइथन कोडहरू विकास गर्न यो एक शानदार आईडीई हो जुन हामीले पीपीएबाट स्थापना गर्न सक्छौं।
फायरफक्स क्वान्टमले सबैलाई खुशी पार्दछ
मोजिला फायरफक्स 57 XNUMX को बेटा संस्करण वा फायरफक्स क्वान्टमको रूपमा पनि परिचित छ, जारी गरिएको छ। यस संस्करणले यसको गतिको साथ सबैलाई छक्क पार्छ ...
उबुन्टु १..१० (आर्टफुल आरडवार्क) को अन्तिम बेटा अब डाउनलोड गर्न योग्य छ
उबुन्टु १..१० को अन्तिम बिटा अब डाउनलोडका लागि उपलब्ध छ। हामी मुख्य समाचार, आईएसओ छवि को डाउनलोड लिंकको साथमा प्रकट गर्दछौं
अद्भुत खोजकर्ता, GitHub मा टर्मिनलबाट परियोजनाहरू खोज्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी अद्भुत खोजीकर्तालाई हेर्नेछौं। यस अनुप्रयोगको साथ हामी गिब हबमा उब्न्टु टर्मिनलबाट परियोजनाहरू खोज्न सक्छौं।
GNU Emacs, Ubuntu / Linux Mint का लागि यो पौराणिक पाठ सम्पादक स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी Gnu Emacs लाई हेर्नेछौं। यो एक शक्तिशाली र धेरै लोकप्रिय सम्पादक हो जुन हामी लगभग केहि पनि गर्न सक्छौं।
उबुन्टु १..१० सँग 17.10२-बिट संस्करण हुँदैन, न भविष्यको उबन्टुको स्थिर संस्करणहरू हुनेछ
उबुन्टुसँग अब 32२-बिट संस्करण हुनेछैन। निर्णयले उबन्टुको आधिकारिक संस्करणलाई मात्र असर गर्दछ र उबुन्टु १..१० र पछि हुने छ ...
यूबीपोर्ट्सले उबन्टु फोन उपकरणहरूको लागि ओटीए -२ सुरूवात गर्‍यो
युबीपोर्ट्सले उबन्टु टच र उबन्टु फोनसँग अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा आएका उपकरणहरूमा काम गर्न जारी राख्दछ। अब उनीहरूसँग पहिले नै OTA-2 छ
Jupyter नोटबुक, चलाउनुहोस् र ब्राउजर मा आफ्नो कोड दस्तावेज
अर्को लेखमा हामी जुपिटर नोटबुकमा एक नजर राख्नेछौं। यस प्रोग्रामको साथ हामी ब्राउजरमा हाम्रो पायथन कोडहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनेछौं।
उबंटु १..१० डकमा डक गरिएका अनुप्रयोगहरूले प्रगति पट्टी र सूचनाहरू देखाउँदछ
उबुन्टु १..१० को उबन्टु डकमा डक गरिएका सबै अनुप्रयोगहरूले सूचनाहरू र प्रगति पट्टीहरू उनीहरूको आइकनहरू देखाउनेछ।
NodeJS, Ubuntu मा जाभास्क्रिप्टको लागि यो रनटाइम वातावरण स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी नोडजेएसलाई हेर्नेछौं। यो जाभास्क्रिप्टको लागि क्रस-प्लेटफर्म वातावरण हो जुन हामी उबन्टुमा प्रयोग गर्न सक्छौं।
विकीट, तपाइँको अपरेटिंग प्रणालीको टर्मिनलबाट विकिपेडिया खोज्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी विकिलाई हेर्नेछौं। यो उपयोगिताले टर्मिनलबाट विकिपेडिया लेखहरूको सारांशहरू परामर्श गर्न मद्दत गर्दछ।
हाम्रो स्काइप र उबुन्टुमा "स्काइपको यो संस्करण अब समर्थित छैन" कसरी समाधान गर्ने
स्काइपमा देखा पर्ने त्रुटिको समाधानहरूको साथ सानो मार्गनिर्देशन जसले "स्काईपको यो संस्करण अब समर्थित छैन" कार्यक्रमको सबैभन्दा नयाँ संस्करणको रूपमा संकेत गर्दछ।
PiTiVi, यस साधारण भिडियो सम्पादकको फ्ल्याटप्याक प्याकेज स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी PiTiVi फ्ल्याटप्याक प्याकेज कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे एक नजर लिनेछौं। यो एक सरल तर शक्तिशाली भिडियो संपादक हो।
प्लाज्मा .5.11.११ अपडेटको रूपमा कुबन्टु १..१० मा आउँदैछ
प्लाज्मा को अर्को संस्करण, प्लाज्मा .5.11.११, कुबन्टु १..१० मा एक अपडेटको कारण कुबन्टु टोली हप्ता पछि रिलीज हुने छ।
सी शेलहरू, तपाईंको टर्मिनल वेब मार्फत वास्तविक समयमा कसैलाई पनि देखाउनुहोस्
अर्को लेखमा हामी समुद्री शेलहरू हेर्नेछौं। यस प्रोग्रामको साथ तपाईं आफ्नो टर्मिनल वेब मार्फत वास्तविक समयमा साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ।
फ्लाइटगेयर, यस उडान सिम्युलेटर पीपीएबाट सजीलै स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी फ्लाइट गियरमा हेर्नेछौं। यो हाम्रो उबन्टु को लागी एक शानदार खुला स्रोत उडान सिम्युलेटर हो।
लोकलटनेल, तपाइँको स्थानीय सर्भर ईन्टरनेटबाट पहुँचयोग्य बनाउनुहोस्
अर्को लेखमा हामी लोकलटनेलमा एक नजर राख्नेछौं। यस कार्यक्रमले हामीलाई हाम्रो स्थानीय सर्भरलाई इन्टरनेटबाट पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गर्दछ।
SoCLI, टर्मिनलबाट स्ट्याक ओभरफ्लोमा सोधपुछ गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी SoCLI लाई हेर्नेछौं। यो एक कार्यक्रम हो जुन हामीलाई टर्मिनलबाट स्ट्याक ओभरफ्लोमा सोधपूछ गर्न अनुमति दिनेछ।
उबुन्टु र माइक्रोसफ्टले Azure का लागि अनुकूलित कर्नेल सिर्जना गर्दछ
माइक्रोसफ्ट र क्यानोनिकलले माइक्रोसफ्टको क्लाउड सर्वर सेवा, उज्न्टुमा उबुन्टुको लागि अनुकूलित कर्नेल जारी गरेको छ ...
Programs प्रोग्रामहरू जुन हामी उबन्टुमा प्रयोग गर्न सक्छौं हाम्रो पोडकास्टहरू सिर्जना गर्न
हामी best वटा उत्तम कार्यक्रमहरूको बारेमा कुरा गर्छौं जुन उबन्टुका लागि पोडकास्टहरू सिर्जना र सम्पादन गर्नका लागि अवस्थित छन्। एक घटना जुन आईट्यून्स वा साधारण रेडियोभन्दा पर जान्छ ...
न्यूजबीटर, तपाईंको फिडहरू सरल तरीकाले कन्सोलबाट पढ्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी न्यूजबटरमा एक नजर राख्नेछौं। यो कन्सोलबाट तपाईको आरएसएस / एटम फिडहरू पढ्नको लागि सक्षम हुन अनुप्रयोग हो।
सबै उबन्टु संस्करणहरूमा ब्लूबोर्न भेद्यता प्याच गरियो
सबै उबन्टु संस्करणका प्रयोगकर्ताहरूले ब्लूबोर्न जोखिमबाट बचाउन आफ्नो प्रणालीहरू सकेसम्म चाँडो अपडेट गर्नुपर्नेछ।
मीर १.० उबन्टु १..१० को लागि उपलब्ध हुनेछ
क्यानोनिकलको ग्राफिकल सर्भर, मीर, उबुन्टु १..१० मा हुनेछ। मीर संस्करण १.० उपलब्ध हुनेछ र अन्य ग्राफिक सर्भरहरूसँग उपयुक्त हुनेछ ...
सर्फ्राउ, उबन्टु टर्मिनलबाट तपाईलाई चाहिने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्
अर्को लेखमा हामी सर्फ्रालाई हेर्नेछौं। यो ईन्टरफेसले टर्मिनलबाट धेरै खोज इञ्जिनहरू र वेबसाइटहरूको खोजी गर्न हामीलाई अनुमति दिनेछ।
फायरफक्स, थन्डरबर्ड र VLC उबंटु प्रयोगकर्ताहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू छन्
क्यानोनिकलद्वारा गरिएको सर्वेक्षणले उबुन्टु प्रयोगकर्ताहरूमाझ सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू प्रकट गर्दछ जुन अपरेटि system प्रणालीमा पूर्वनिर्धारित रूपमा देखा पर्न सक्छ।
उबन्टु १.17.04.०XNUMX मा JDK कसरी स्थापना गर्ने
जाभा JDK स्थापना गर्न र कन्फिगर कसरी गर्ने बारे हाम्रो सानो उब्बन्टु १ 17.04.०XNUMX मा मार्गनिर्देशन। जाभा विकासकर्ताहरूको लागि एक आवश्यक वा महत्त्वपूर्ण उपकरण
आफुलाई लैजानुहोस्, टर्मिनल तत्काल कसैसँग साझेदारी गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी टमेटेलाई हेर्नेछौं। यस कार्यक्रमले हामीसँग टर्मिनल कसैसँग पनि साझेदारी गर्न अनुमति दिनेछ।
टार्न्च, टर्मिनलबाट टोरेन्ट फाइलहरू खोजी र डाउनलोड गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी टोरेन्चलाई हेर्नेछौं। यो टर्मिनल अनुप्रयोग हो जुनसँग टोरेन्ट फाईलहरू खोजी र डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
Krop, उबन्टुमा पीडीएफ फाईलहरू काट्नेका लागि उपकरण स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी क्रपलाई हेर्नेछौं। यस कार्यक्रमले हामीलाई उबन्टुबाट हाम्रो पीडीएफ फाइलहरू काट्न मद्दत गर्दछ।
zzupdate, टर्मिनलमा एकल आदेशको साथ तपाईंको उबन्टु प्रणाली अपडेट गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी zzupdate मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो टर्मिनल प्रोग्रामले एकल कमाण्डको साथ हामीलाई उबन्टु अपडेट गर्न अनुमति दिनेछ।
मेरो उबन्टु १.17.04.०XNUMX को लागि कुन हल्का डेस्कटपहरू छन्?
विकल्पहरू जुन हामीसँग उबंटु १ 17.04.०XNUMX मा भएका प्रकाश डेस्कटपहरू, डेस्कटपहरूको लागि हामीले हाम्रो पुरानो युनिटी वा जिनोम परिवर्तन गर्ने विकल्पहरूको बारेमा एउटा सानो मार्गनिर्देशन ...
ExifTool, पढ्नुहोस् वा Ubuntu बाट तपाईंको फाईलहरूको मेटाडेटा हेरफेर गर्नुहोस्
अर्को लेख मा हामी ExifTool मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस कार्यक्रमले तपाईंलाई उबन्टुबाट फाइलहरूको मेटाडाटा पढ्न वा परिमार्जन गर्न अनुमति दिनेछ।
Synfig स्टूडियो, एक शक्तिशाली एनिमेशन सफ्टवेयर र खुला Soure
अर्को लेखमा हामी सिनफिग स्टुडियोमा एक नजर राख्नेछौं। यो २ डी एनिमेसन सफ्टवेयर हो जुन हामी पेशेवर एनिमेसनहरू सिर्जना गर्न सक्छौं।
RawTherapee, फोटोहरूको गैर-विनाशकारी पोस्ट-उत्पादन
अर्को लेखमा हामी RawTherapee मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो धेरै प्रकारको छवि विकास गर्नका लागि अनुप्रयोग हो।
S-tui, सजिलै टर्मिनल बाट सीपीयू निगरानी
अर्को लेखमा हामी s-tui मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो उपकरणले टर्मिनलबाट CPU को प्रयोग निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ।
नेटडाटा, वास्तविक समयमा हाम्रो उबन्टुको मेट्रिक्स निरीक्षण गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी नेटडाटामा हेर्नेछौं। यस डिमनको साथ हामी हाम्रो उबन्टु प्रणालीको वास्तविक समयमा मेट्रिक्स अनुगमन गर्न सक्षम हुनेछौं
उब्न्टु १.17.04.०XNUMX मा कसरी कोटलिन स्थापना गर्ने
उबुन्टु १.17.04.०XNUMX मा कोट्लिन प्रोग्रामिंग भाषा कसरी स्थापना गर्ने र यस भाषाको साथ अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुने सानो ट्यूटोरियल।
उबुन्टु स्न्याप प्याकेजहरू एन्ड्रोइडमा काम गर्दछ
स्न्याप प्याकेजहरूको टेक्नोलोजीको अन्तिम अपडेट पछि, यी एन्ड्रोइड स्टार्टअपका साथ उपयुक्त छन्, भविष्यका लागि पहिलो चरण हो ...
ओबीएस स्टुडियो, डेस्कटपबाट भिडियोको रेकर्डि and र प्रत्यक्ष स्ट्रिमि।
अर्को लेखमा हामी ओबीएस स्टुडियो (ओपन ब्रोडकास्ट सफ्टवेयर) लाई हेर्नेछौं। यसको साथ हामी उबन्टुबाट नेटवर्कमा हाम्रा भिडियोहरू प्रसारण गर्न सक्दछौं।
Cryptomator, ग्राहक साइड ईन्क्रिप्शन सफ्टवेयर
अर्को लेखमा हामी क्राइप्टोमेटरमा एक नजर राख्नेछौं। यो ग्राहक पक्षको लागि ईन्क्रिप्शन सफ्टवेयर हो र हामी उबन्टुमा प्रयोग गर्न सक्छौं।
ट्रिगर रैली, उबन्टु र डेरिवेटिवहरूको लागि खुला स्रोत खेल
अर्को लेखमा हामी ट्रिगर रैलीलाई हेर्नेछौं। यो कम हार्डवेयर संसाधनहरूको साथ टिमका लागि खुला स्रोत खेल हो।
Natron, खुला स्रोत प्रभाव जस्तै कम्पोजि software सफ्टवेयर पछि
अर्को लेखमा हामी नाट्रनलाई हेर्नेछौं। यो प्रभाव-जस्तै कम्पोजि software सफ्टवेयर पछि क्रस-प्लेटफर्म खुला स्रोत हो।
युबीपोर्टहरू वा कसरी उबन्टु फोन भएको हुनुपर्छ
UBPorts उबन्टु फोनको साथ अगाडि जान्छ। उसले न केवल विकासमा सुधार गरिरहेको छ तर उबुन्टुको मोबाइल अपरेटि system प्रणालीलाई प्रमोट गर्दैछ
जिफकुरी, सजिलै भिडियोबाट आफ्नो एनिमेटेड GIFs सिर्जना गर्नुहोस्
यस लेखमा हामी गिफक्रीलाई हेर्नेछौं। यो एक प्रोग्राम हो जुन हामी उबन्टुबाट भिडियोहरूबाट एनिमेटेड Gifs सिर्जना गर्न सक्छौं।
उबुन्टु १..१० (आर्टफुल अर्डवार्क) सँग सबै ड्राइभर रहित प्रिन्टिंग मापदण्डहरूको समर्थन हुनेछ
उबुन्टु १..१० जीनोम 17.10..२3.26 डेस्कटप वातावरणसँग जहाजमा पठाइन्छ र सबैभन्दा आधुनिक प्रिन्टरहरूको लागि पूर्वनिर्धारितद्वारा समर्थन प्राप्त गर्दछ।
उबन्टु १.17.04.०XNUMX मा Dconf कसरी स्थापना गर्ने
DConf एक सरल तर शक्तिशाली अनुकूलन उपकरण हो जुन जिनोम वातावरण र यसका सबै डेरिभेटिभहरू छन् र हामी उबुन्टु १.17.04.० install मा स्थापना गर्न सक्छौं ...
PolyBrowser, Panoramic ब्राउजिंग को लागी एक वेब ब्राउजर
अर्को लेखमा हामी PolyBrowser मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस वेब ब्राउजरको मुख्य सुविधाले हामीलाई Panoramic नेभिगेसन प्रदान गर्दछ।
धेरै Minecraft डेवलपर्स Gnu / लिनक्स को लागी एक Minecraft वीडियो खेल को अस्तित्व पुष्टि गरीएको छ तर यसको रिलीज मिति अझै अज्ञात छ।
Light लाइटवेट ब्राउजरहरूको सूची, केही संसाधनहरूको साथ मेशिनहरूको लागि आदर्श वा यदि हामी हाम्रो ब्राउज गर्दा हाम्रो प्रणालीको थोरै प्रयोग गर्न चाहन्छौं।
uniCenta oPOS, तपाईंको व्यापारको लागि बिक्रीको एक खुला स्रोत पोइन्ट
अर्को लेखमा हामी युनिसेन्टा oPOS मा एक नजर राख्नेछौं। यो कुनै खुला लाइसेन्स सीमित बिना POS हो।
आधिकारिक उबन्टु १..१० स्वादका बिटा १ अब उपलब्ध छन्
आधिकारिक उबन्टु १..१० स्वादका पहिलो बेटा अब सबैको लागि उपलब्ध छन्। यी संस्करणहरूले परिष्कृत गर्दछ र प्रत्येक संस्करणमा नयाँ के हुन्छ देखाउँदछ ...
MySQL Workbench, डाटाबेस डिजाइन को लागी एक दृश्य उपकरण
अर्को लेखमा हामी MySQL वर्कबेंचलाई हेर्नेछौं। यो कार्यक्रमले हामीलाई ग्राफिक रूपमा डाटाबेस विकास गर्न अनुमति दिनेछ।
Nload, टर्मिनल को लागी एक कार्यक्रम जुन नेटवर्क ट्राफिक नियन्त्रण गर्न को लागी
अर्को लेखमा हामी nload मा एक नजर लिन जाँदैछन्। टर्मिनलका लागि यो अनुप्रयोगको साथ हामी हाम्रो नेटवर्कको ट्राफिकलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं।
मिठाई होम थ्रीडी, एक सरल तरीकाले इन्टीरियर डिजाइनहरू बनाउनुहोस्
यस लेखमा हामी मिठाई होम थ्रीडीमा एक नजर राख्नेछौं। यस अनुप्रयोगको साथ हामी थ्रीडीमा उबन्टुबाट साधारण तरीकाले इन्टीरियर्स डिजाइन गर्न सक्दछौं।
Yandex ब्राउजर, रूसबाट एक हल्का वेब ब्राउजर
अर्को लेखमा हामी Yandex ब्राउजर मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो एक हल्का वेब ब्राउजर हो जुन रूसबाट हाम्रो उबन्टु प्रणालीको लागि आउँदछ।
Sandman, एक सहायता कम्प्युटरको अगाडि बढि उत्पादक बन्न
अर्को लेखमा हामी Sandman मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो एक अनुप्रयोग हो जुन हामीलाई पीसीको अगाडि काम गर्दा ताजा रहन मद्दत गर्दछ।
Ubuntu १.17.04.०XNUMX मा फाल्कन कसरी स्थापना गर्ने, पहिले QupZilla को नामले चिनिन्थ्यो
फाल्कन वेब ब्राउजर कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे साना लेख, Qupzilla मा आधारित केडीई परियोजना को वेब ब्राउजर ...
Selene Media Converter 17.7, Ubuntu को लागि मल्टिमेडिया रूपान्तरण
अर्को लेखमा हामी सेलेन मिडिया कन्भर्टर १ install. install कसरी स्थापना गर्ने भनेर हेर्नेछौं। यो मल्टिमेडिया कन्भर्टरले हामीलाई उबन्टुमा मद्दत गर्न सक्छ।
उबन्टु म्याटमा Xfwm4 कसरी प्रयोग गर्ने
Xfwm4 प्रबन्धक, Xubuntu विन्डो प्रबन्धकको लागि उबन्टु MATE विन्डो प्रबन्धक कसरी स्थापना वा परिवर्तन गर्ने बारेमा साना ट्यूटोरियल।
DAEMON सिंक गर्नुहोस्, तपाईंको फाईलहरू Android वा IOS मा उबंटुको साथ समिकरण गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी DAEMON सिnc्कमा एक नजर राख्नेछौं। यसको साथ हामी हाम्रो उबन्टुको साथ हाम्रो एन्ड्रोइड वा IOS फाईलहरू समक्रमण गर्न सक्दछौं।
उबन्टु १.17.04.०XNUMX मा अपाचे केसन्ड्रा कसरी स्थापना गर्ने
उबुन्टु १.17.04.०XNUMX मा अपाचे केसन्ड्रा कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल, उबुन्टु सर्भर र यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण डेटाबेस र उपकरण ...
माइक्रो टेक्स्ट एडिटर, एक सजीलो टर्मिनल पाठ संपादक
अर्को लेखमा हामी माइक्रो पाठ सम्पादकमा एक नजर राख्नेछौं। उबन्टु टर्मिनलका लागि टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न यो सरल छ।
के तपाईसँग उबन्टुमा बिग्रिएको निर्भरताहरूको समस्या छ? उनीहरू कसरी समाधान हुन्छन् पत्ता लगाउनुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईंलाई फ्ल्यासको स्थापनाको साथ समस्या छ
दुराचारी प्लेयर 3.9..XNUMX, उबन्टुको लागि हल्का संगीत संगीत
अर्को लेखमा हामी दुस्साहस खेलाडीमा एक नजर राख्नेछौं। यो संगीत प्लेयर यसको संस्करण 3.9 मा पुगेको छ।
MellowPlayer, एक नि: शुल्क र बहु ​​प्लेटफार्म अनलाइन संगीत प्लेयर
अर्को लेखमा हामी मेलोप्लेयरमा एक नजर राख्नेछौं। यो एक खेलाडी हो जसले हामीलाई बिभिन्न अनलाइन सेवाहरूबाट संगीत प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।
Xed Text Editor, उबुन्टुको लागि एकदम पूर्ण Gedit प्रतिस्थापन
अर्को लेखमा हामी Xed Text Editor मा हेर्नुहोस्। यो पूर्ण पाठ सम्पादक हो जुन उबन्टुमा gedit को लागी राम्रो प्रतिस्थापन हुन सक्छ।
उबुन्टु १.16.04.०XNUMX एलटीएस स्थापना गरेपछि के गर्ने
उबुन्टु १ installing.०16.04 स्थापना गरेपछि के गर्ने? हामी तपाईंलाई अर्को चरणहरू बताउँदछौं जुन तपाईंले आफ्नो पीसीमा उबुन्टुको यो संस्करण स्थापना गरेपछि लिनु पर्छ।
Fotowall १.० 'रेट्रो', पृष्ठभूमि, कोलाज, कभर, आदि सिर्जना गर्नुहोस् ... तपाईंको छविहरूका साथ
अर्को लेखमा हामी Fotowall १.० 'रेट्रो' मा एक नजर राख्नेछौं। यसले हामीलाई हाम्रा छविहरू परिमार्जन गर्न, प्रभाव दिन र व्यवस्थित गर्न अनुमति दिनेछ।
Citra: एक खुला स्रोत निन्टेन्डो 3DS इमुलेटर
Citra एक खुला स्रोत निन्टोन्डो 3DS इम्युलेटर हो C ++, GPLv2 अन्तर्गत इजाजतपत्र। यो इमुलेटर दिमागमा विकास गरीएको छ ...
टर्मिनलमा उबुन्टु लोगो कसरी राख्ने
हाम्रो उबन्टुको टर्मिनल कसरी अनुकूलित गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल, प्रत्येक टर्मिनलको सुरूमा एएससीआईआई कोडमा उबन्टु लोगो थप्दै ...
Bookworm, एक सरल डिजाइन र सजिलो प्रयोगको साथ ebook पाठक
यो लेख मा हामी Bookworm मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो सरल ईबुक पाठकले हामीलाई यसको एक सरल डिजाइन र यसको प्रयोगमा धेरै सरलता प्रदान गर्दछ।
हल्का मून ब्राउजर, यस ब्राउजरबाट अधिक प्राप्त गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी प्याले मून ब्राउजरमा एक नजर राख्नेछौं। यो खुला स्रोत वेब ब्राउजरले हामीलाई रमाईलो अनुभव प्रदान गर्दछ।
उबुन्टु १.17.04.०XNUMX मा Qmmp कसरी स्थापना गर्ने
Qmmp एक पर्याप्त प्रकाश र शक्तिशाली संगीत प्लेयर हो जुन पौराणिक Winamp प्लेयरसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो प्लेयर ubuntu १.17.04.०XNUMX मा स्थापना गर्न सकिन्छ
शटकट भिडियो सम्पादक, KK समर्थनको साथ खुला स्रोत भिडियो सम्पादक
अर्को लेखमा हामी शटकट भिडियो सम्पादकमा एक नजर राख्नेछौं। यो नि: शुल्क सफ्टवेयर प्रोग्रामले हामीलाई भिडियो मोनेटेज बनाउन अनुमति दिनेछ।
Ubuntu १..१० Utopic Unicorn मा साम्बा कसरी स्थापना र कन्फिगर गर्ने सार्वजनिक फोल्डर साझा गर्न (बेनामी पहुँच) र अर्को पासवर्ड पहुँचको साथ।
कसरी उबन्टु १.16.04.० L LTS मा tar.gz स्थापना गर्ने
के तपाइँ tar.gz स्थापना गर्न आवश्यक छ र कसरी गर्ने थाहा छैन? इन्टर गर्नुहोस् र यो साधारण ट्यूटोरियलको चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् जसमा हामी चरण-चरणमा कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्दछौं।
मिक्सएक्सएक्स, नि: शुल्क डीजे सफ्टवेयरको साथ सिर्जना गरिएको मिक्सिंग कन्सोल
अर्को लेखमा हामी मिक्सएक्सएक्सएक्स हेर्नेछौं। यो कुनै पनि उन्नत वा नौसिखिए डीजेको लागि एक नि: शुल्क सफ्टवेयर मिक्सर हो।
CodeLite, उबन्टुमा तपाईंको कोडहरू विकास गर्न राम्रो आईडीई
अर्को लेखमा हामी CodeLite मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यस आईडीईको साथ हामी हाम्रो उबंटुबाट सी, सी ++, PHP, आदि कोडहरू विकास गर्न सक्षम हुनेछौं।
उबन्टु एलटीएस कसरी उबन्टु १.16.04.०XNUMX मा अपग्रेड गर्ने
उबुन्टु एलटीएस कसरी उबन्टु १.16.04.०XNUMX मा अद्यावधिक गर्ने भन्ने बारे सानो मार्गनिर्देशन, अर्को LTS संस्करण जुन आम जनतालाई भोलि जारी गरिनेछ ...
कसरी उबारु १ U.०16.04 मा उपकरणपट्टी तल राख्ने
हामी तपाईंलाई उबन्टुमा उपकरणपट्टी कसरी राख्ने भनेर देखाउँदछौं, आधारभूत विकल्प जुन सधैं उपलब्ध हुँदैन। तपाईंलाई थाहा छ कसरी पट्टी तल राख्ने?
बुका, उबन्टुमा तपाईंको ई-पुस्तकहरू कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी बुकालाई हेर्नेछौं। यो पीडीएफ ढाँचामा एक शानदार ईबुक पाठक हो जसले हामीलाई उबन्टुमा आरामसँग पढ्न अनुमति दिनेछ।
उबुन्टुको गति बढाउनुहोस्
तपाइँको उबन्टु पीसी तपाईले चाहानु भएको छिटो चल्दै छैन? यी चालहरूको साथ उबन्टुको गति द्रुत गर्न सजिलो छ र तपाईंको कम्प्युटरमा चपलता र तरलता फर्काउँछ।
स्पेगेटी, तपाईंको वेब अनुप्रयोगहरूको सुरक्षा स्क्यान गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी स्पेगेटी वेब अनुप्रयोग सुरक्षा विश्लेषकमा एक नजर राख्नेछौं। यो प्रयोग गर्नको लागि एक धेरै साधारण टर्मिनल प्रोग्राम हो।
उबन्टु १.3.4.०17.04 वा उबुन्टु १.16.04.०XNUMX मा नेमो XNUMX कसरी स्थापना गर्ने
सस्तो ट्यूटोरियल कसरी उबन्टु १.3.4.०17.04 वा उबुन्टु १.16.04.०XNUMX मा नेमो install. install स्थापना गर्ने, एक हल्का फाईल प्रबन्धक नौटिलसमा आधारित छ तर दालचिनी स्थापना नगरी कसरी स्थापना गर्ने ...
yEd ग्राफ सम्पादक, उबन्टुबाट बिभिन्न प्रकारको रेखाचित्र बनाउनुहोस्
अर्को लेखमा हामी yEd ग्राफ सम्पादकमा एक नजर राख्नेछौं। यस प्रोग्रामको साथ हामी उबन्टुबाट बिभिन्न प्रकारका रेखाचित्रहरू बनाउन सक्छौं।
उबुन्टुलाई समर्पित UbuCon सम्मेलन September देखि १० सम्म पेरिसमा हुनेछ
दोस्रो UbuCon यूरोप घटना, यूरोपीयन Ubuntu समुदाय को लागी एक सम्मेलन, सेप्टेम्बर -8-१० पेरिस मा हुनेछ।
जुबन्टु १.17.04.०17.04 लाई कसरी अनुकूलित गर्ने वा उबन्टु १.XNUMX.०XNUMX मा Xfce
जुबन्टु १.17.04.०17.04 लाई कसरी अनुकूलित गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल वा उबन्टु १.XNUMX.०XNUMX को साथ Xfce। यस प्रकाश आधिकारिक उबन्टु स्वाद लाई अनुकूलित गर्नको लागि आधारभूत गाईड ...
Makehuman १.१.१, Ubuntu मा 1.1.1D मानव बनाउनुहोस् र मोडेल गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी मेकुमान १.१.१ लाई हेर्नेछौं। यो प्रोग्रामको साथ हामी हाम्रो उबन्टुबाट थ्रीडीमा मानवहरू सिर्जना गर्न र मोडल गर्न सक्दछौं।
Bu उब्न्टुको लागि माइक्रोसफ्ट पहुँचका लागि free निःशुल्क विकल्पहरू
माईक्रोसफ्ट एक्सेसमा तीन नि: शुल्क विकल्पमा सानो मार्गनिर्देशन। माइक्रोसफ्ट डाटाबेस उबन्टुमा छैन तर हामी यसको विकल्पहरूको उपयोग गर्न सक्दछौं
Inkscape ०.0.92।, यो भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादक स्थापना गर्न तीन तरिकाहरू
यस लेखमा हामी इन्सकेप ०.0.92 ve भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादकमा एक नजर राख्नेछौं। यसको साथ हामी आफ्नै लोगोहरू र अन्य सिर्जना गर्न सक्दछौं।
उबुन्टु डक, उबुन्टु १..१० मा नयाँ डेस्कटप सहायक
उबुन्टु डक नयाँ डकको नाम हो जुन उबन्टु १..१० पूर्वनिर्धारित रूपमा हुनेछ। यो डक ड्यास टक डकको फोर्क हो जुन उबुन्टुद्वारा परिमार्जन गरिएको छ ...
AMDGPU-PRO १..17.30० ग्राफिक्स ड्राइभरले उबुन्टु १.16.04.3.०XNUMX. L LTS का समर्थन जारी गर्दछ
AMD का नयाँ ग्राफिक्स ड्राइभर, लिनक्सको लागि AMDGPU-PRO १..17.30० भनिन्छ, नयाँ उबन्टु १.16.04.3.०XNUMX. L LTS अपरेटिंग प्रणालीको लागि समर्थन ल्याउँछ।
Ubuntu १.17.04.०XNUMX मा PSP खेलहरू कसरी खेल्ने
हामी कसरी हाम्रो Ubuntu १.17.04.०XNUMX मा एक सोनी PSP भिडियो खेल इमुलेटर प्रयोग र स्थापना गर्ने वर्णन गर्दछौं। एक व्यावहारिक तरीका शक्तिशाली भिडियो खेलहरू
Mps-youtube, टर्मिनलबाट यूट्यूब भिडियो प्ले र डाउनलोड गर्नुहोस्
यस लेखमा हामी Mps- यूट्यूबमा एक नजर राख्नेछौं। यस अनुप्रयोगको साथ हामी टर्मिनलमा YouTube बाट भिडियोहरू खोज्न, प्ले गर्न वा डाउनलोड गर्न सक्दछौं।
पाउडर प्लेयर १.१०, हाइब्रिड टोरेन्ट ग्राहक भिडियो प्लेयर
अर्को लेखमा हामी पाउडर प्लेयर १.१० लाई हेर्नेछौं। यो उबन्टुको लागि एक हाइब्रिड टोरेन्ट ग्राहक भिडियो प्लेयर हो।
सम्पादक Fotoxx, उबन्टुबाट छविहरू सम्पादन गर्नका लागि एक कार्यक्रम
अर्को लेखमा हामी Fotoxx सम्पादकमा एक नजर राख्नेछौं। यस कार्यक्रमले हामीलाई उबन्टुमा छविहरू सजिलै सम्पादन गर्न र सुधार गर्न अनुमति दिनेछ।
म्याक र विन्डोजबाट बुटेबल उबुन्टु यूएसबी कसरी सिर्जना गर्ने
के तपाइँ विन्डोज वा म्याकबाट बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ र कसरी थाहा छैन? हामी तपाईंलाई देखाउछौं कसरी एक USB बाट एक USB बाट उबन्टु स्थापना गर्न।
QOwnNotes, आफ्नै क्लाउड / नेक्स्टक्लड र नोट जेनेर्रेसनको साथ सि sy्क गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी QOwnNotes मा एक नजर राख्नेछौं। यो एक साधारण प्रोग्राम हो जुन हामी हाम्रो नोटहरू सिर्जना गर्न र तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्दछौं।
रास्पबेरी पाई २, कर्नेल 2.१4.13, भर्चुअल बक्स ... उबन्टु कर्नेल टोली कडा मिहिनेत गर्दछ
उबुन्टु कर्नेल टोलीले कडा परिश्रम गरिरहेको छ। ऊबन्टु १..१० मा कर्नेल 4.13..१17.10 ल्याउने काम मात्र गर्दैन तर पी २ को लागि पनि उसले विकास गर्छ
जादुई वर्महोल, टर्मिनलबाट सुरक्षित फाईलहरू पठाउनुहोस्
अर्को लेखमा हामी जादू वर्महोललाई हेर्नेछौं। यस CLI कार्यक्रम को साथ हामी फाइलहरू कम्प्युटरहरू बीच सुरक्षित रूपमा पठाउन सक्छौं।
उबन्टु १.16.04.०XNUMX मा मनोोकवारी कसरी स्थापना गर्ने
मानोकवारी Gnome को लागी एक अनुकूलन वा ईन्टरफेस हो। एक ईन्टरफेस जसले एकता छोड्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि जीनोमलाई मित्रैलो बनाउन सक्दछ।
लोलीपप, उबुन्टु र डेरिवेटिवहरूका लागि अर्को अडियो प्लेयर
अर्को लेखमा हामी Lollypop मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो उबुन्टु र डेरिवेटिवहरूका बिभिन्न संस्करणहरूको लागि संगीत प्लेयर हो।
RPCS3: PS3 खेल इमुलेटर उबन्टुमा
RPCS3 एक खुला स्रोत इमुलेटर र डिबगर सी ++ मा विन्डोज र लिनक्सको लागि लेखिएको हो। इमुलेटर बुट गर्न र सयौं खेलहरू खेल्न सक्षम छ।
लेख्नुहोस्! उबन्टु प्रयोग गर्ने लेखकहरूको लागि एक minimalist अनुप्रयोग
लेख्नुहोस्! हामी लेख्दा सबै भन्दा राम्रो सम्भव उत्पादकता प्राप्त गर्न मा केन्द्रित एक अनुप्रयोग हो। पेशेवर लेखक को लागी एक विचलन मुक्त वातावरण प्रदान गर्दछ
USB बाट लिनक्स मिन्ट कसरी स्थापना गर्ने: सबै कुरा तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ
यदि तपाईं लिनक्स टकसाल स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा छैन कि यो USB बाट गर्न उत्तम हो। यस पोष्टमा हामी यो र अरू धेरै वर्णन गर्नेछौं।
र्यामबक्स, एकल अनुप्रयोगमा तपाईंको सबै सन्देश
अर्को लेखमा हामी रामबक्सलाई हेर्नेछौं। यो एक अनुप्रयोग हो जसबाट हामी हाम्रो सबै सन्देशहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं।
उबुन्टुको लागि कार्यालय
उब्बन्टुका लागि माइक्रोसफ्ट अफिस, केहि वर्ष अघि अकल्पनीय कुरा। के तपाईंलाई थाहा छ उबन्टु वा लिनक्समा अफिस कसरी स्थापना गर्ने? इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यसलाई क्रमशः वर्णन गर्नेछौं।
उबन्टु १.57.०17.04 मा फायरफक्स have XNUMX कसरी हुन्छ
Ubuntu को नवीनतम स्थिर संस्करण Ubuntu १.57.०17.04 मा Mozilla Firefox Firef XNUMX को नयाँ संस्करण कसरी र परीक्षण गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल।
Ubunsys, उबंटुको लागि उन्नत कन्फिगरेसन
अर्को लेखमा हामी युबुनसिसलाई हेर्नेछौं। यो एक प्रोग्राम हो जुन हामीलाई उबन्टुको उन्नत कन्फिगरेसनमा पहुँच प्रदान गर्दछ।
उबुन्टु १..१० मा नयाँ डक हुनेछ, तर ड्यास टक डक छैन
उबुन्टु टोलीले उबन्टु १..१० मा नयाँ डकको अस्तित्व पुष्टि गरेको छ। डक जसले एकताको अनुपस्थितिमा प्रयोगकर्तालाई भर्न मद्दत गर्दछ।
VidCutter 4.0.०, आधारभूत भिडियो सम्पादक जुन प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ
यो लेख मा हामी VidCutter मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो एक साधारण सम्पादक हो जसले हामीलाई हाम्रा भिडियोहरूमार्फत सरल चीजहरू गर्न अनुमति दिनेछ।
अल्फा २२ ० एडी अब उपलब्ध छ
० AD एक वास्तविक समय रणनीति भिडियो खेल हो। खेलले प्राचीन इतिहासको केहि धेरै नै महाकाव्य लडाईहरु लाई पुन: निर्माण गर्दछ। अवधि समेटेको छ।
फायरफक्स पठाउनुहोस्, ठूला र आत्म-विनाशकारी फाईलहरू पठाउनुहोस्
यो लेखमा हामी मोजिल्लाको नयाँ सेवा पठाउने भनिन्छ हेरौं। यसले हामीलाई १ जीबी सम्म फाईलहरू पठाउन क्षमता दिनेछ।
अब उपलब्ध उबन्टु १.16.04.3.०XNUMX. L LTS, LTS संस्करणको अन्तिम प्रमुख अपडेट
उबुन्टु एलटीएसको तेस्रो रखरखाव संस्करण जारी गरिएको छ, जुन उबन्टु १.16.04.3.०XNUMX..XNUMX, एक संस्करण जसले पछिल्लो स्थिर सफ्टवेयरमा वितरण अपडेट गर्दछ।
तपाईंको कुराकानीमा घण्टी, सुरक्षा र गोपनीयता
यस लेखमा हामी रि communication सञ्चार प्लेटफर्ममा एक नजर राख्नेछौं। यो गोपनीयता र सुरक्षा सुधार मा विशेष जोड दिन्छ।
उबुन्टु १..१० ले विन्डो नियन्त्रणहरू परिवर्तन गर्दछ
उबुन्टुको नयाँ संस्करण, उबन्टु १..१० ले विन्डो नियन्त्रणहरू परिवर्तन गर्दछ। यो स्थिति परिवर्तन गर्न अधिकतम र बन्द बटन कारण हुनेछ ...
RTV (Reddit टर्मिनल दर्शक), कन्सोलबाट Reddit ब्राउज गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी आरटीभी (रेडडिट टर्मिनल दर्शक) लाई हेर्नेछौं। यो एक कन्सोल ग्राहक छ जसको साथ हामी रेडडिट नेभिगेट गर्न सक्दछौं।
उबन्टु १.5.4.०17.04 मा लिब्रे अफिस .XNUMX.१ कसरी स्थापना गर्ने
Ubuntu मा भर्खरको LibreOffice .5.4..XNUMX संस्करण कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे साना ट्यूटोरियल। यस अवस्थामा उबन्टुको पछिल्लो स्थिर संस्करणमा ...
सद्भाव, जहाँसुकैबाट तपाइँको संगीत सुन्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी हार्मोनीलाई हेर्नेछौं। यो एक संगीत प्लेयर हो जससँग तपाईं आफ्नो अनलाइन सेवाहरूको संगीत प्ले गर्न सक्नुहुन्छ
नयाँ उबन्टु बडगी १..१० वालपेपर पाउनुहोस्
उबुन्टु बड्गी र यसको समुदायले अर्को संस्करणका लागि नयाँ वालपेपर वा वालपेपर चयन गर्न प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ र यी विजेताहरू हुन्।
Ubuntu मा Gscan2pdf १.1.8.4. with को साथ PDF र DjVu फाईलहरूसँग काम गर्नुहोस्
यस लेखमा हामी gscan2pdf मा हेर्नुहोस्। यस कार्यक्रमले हामीलाई .pdf र DjVus फाईलहरूमा उबुन्टुमा एक सरल तरीकाले काम गर्न अनुमति दिनेछ।
उबुन्टु बडगी १..१०, एक संस्करण जुन Gnome मा कम निर्भर गर्दछ
उबुन्टु बड्गी १..१० को दोस्रो अल्फा अब सबैको लागि उपलब्ध छ। नयाँ संस्करणले हामीलाई नयाँ आधिकारिक उबन्टु स्वादको बारेमा केही समाचारहरू देखाउँदछ ...
ओपनटन्ज एनिमेसन निर्माता, उबन्टुबाट २D एनिमेसनहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यस लेखमा हामी ओपनटन्जलाई हेर्नेछौं। यो एउटा प्रोग्राम हो जुन हामी हाम्रो उबन्टुबाट 2D एनिमेसनहरू गर्न सक्छौं।
पप! _OS, नयाँ System76 वितरणले आधारको रूपमा उबन्टु १..१० प्रयोग गर्नेछ
System76 यसको पप _OS वितरणको साथ अगाडि बढिरहेको छ। नयाँ वितरण उब्न्टु १..१० र एलिमेन्टरी ओएसमा आधारित हुनेछ, यसको प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सुविधाको लागि ...
mtPaint, हाम्रो उबन्टुमा प्रकाश रेखाचित्रका लागि ग्राफिक सम्पादक
यस लेखमा हामी mtPaint मा एक नजर राख्नेछौं। यो विन्डोज पेन्टको समान प्रकाश ड्राइंगको लागि ग्राफिकल सम्पादक हो।
इलेक्ट्रोन र नेटिभाइयर उबन्टुबाट तपाईंको आफ्नै वेबअप्प सिर्जना गर्न
यस लेखमा हामी इलेक्ट्रोनमा एक नजर राख्नेछौं। यो एक फ्रेमवर्क हो जुन नेटिफाइयरसँग मिलेर हामीलाई हाम्रो आफ्नै वेबअप सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ।
अब उबन्टु MATE १..१० को दोस्रो अल्फा उपलब्ध छ
उबन्टु मेट १ 17.10.१० को दोस्रो अल्फा अब उपलब्ध छ, एक विकास संस्करण जसले उबन्टु मेटको अर्को संस्करण ल्याउने समाचार हामीलाई देखाउँदछ।
jEdit, उबन्टु प्रोग्रामरहरूको लागि नि: शुल्क पाठ सम्पादक
यस लेखमा हामी jEdit मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो टेक्स्ट एडिटर हो र प्रोग्रामिंग कार्य गर्नको लागि चाखलाग्दो सुविधाहरू सहित।
WeChat, उबन्टुको लागि यस च्याटको इलेक्ट्रोन ग्राहक
अर्को लेखमा हामी WeChat इलेक्ट्रॉन वेब अनुप्रयोग मा एक नजर लिन जाँदैछन्। हामी उबन्टुबाट यस अनुप्रयोगको मजा लिन सक्छौं।
कोरेबर्ड १..1.5.1.१ स्थापना गर्नुहोस्, उबुन्टुमा एक धेरै शक्तिशाली ट्विटर ग्राहक
Corebird, एक उत्कृष्ट ग्राहक र एक उत्कृष्ट डिजाइन र सहज डिजाइन, धेरै पूर्ण कि संग आवश्यक विशेषताहरू छन्, पढ्न ...
Wavebox, हाम्रो उबन्टुको लागि ईमेल ग्राहक
अर्को लेखमा हामी Wavebox ईमेल ग्राहकमा एक नजर राख्नेछौं। उहाँसँग हामी गुगलका साथ पूर्ण गतिमा काम गर्न सक्दछौं।
उबुन्टु म्याटले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सोध्दछ कि कुन प्रोग्राम आधिकारिक स्वादमा हुनुपर्दछ
उबुन्टु म्यातेले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई वितरणमा कुन प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्ने वा स्थापना गर्ने भनेर सोध्ने निर्णय गरेको छ, यसैले यसले भिडियो प्लेयरको लागि सोधेको छ।
फायरफक्स 55 17.10 सब भन्दा चाँडो संस्करण हुनेछ, तर यो उबुन्टु १..१० मा हुनेछ?
मोजिला फायरफक्स August 55 अगस्टको अन्त्यमा रिलीज हुनेछ, वेब ब्राउजरको संस्करण जुन अहिले सम्म सब भन्दा छिटो वा कसो जस्तो लाग्ने वाचा गर्दछ ...
Qt 5.9.1.१, (Qt निर्माता 4.3.1.१ समावेश सहित) Ubuntu मा स्थापना
यस लेखमा हामी क्युटी संस्करण 5.9.1.१ लाई हेर्नेछौं। यस प्याकेजले QtCreator IDE समावेश गर्दछ जुन हामी हाम्रो उबन्टु प्रणालीमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
उबुन्टु १..१० अधिक निजी उबन्टु संस्करण हुनेछ
डेस्कको हेड, विल कुकले उबुन्टु १ 17.10.१० को विकासमा भएका परिवर्तनहरूका साथ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ, उब्न्टुलाई सुधार गर्ने परिवर्तनहरू ...
CodeBlocks, उबुन्टुमा C ++ विकासकर्ताहरूको लागि पूर्ण आईडीई
यो लेखमा हामी कोडब्लकमा एक नजर राख्नेछौं। प्लगइनहरूको साथ यो हल्का वजन र एक्स्टेन्सिबल IDE को साथ तपाईं आरामसंगत C ++ कोड विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
कोष्ठकको नयाँ संस्करणमा ग्लोबल मेनूको साथ अधिक अनुकूलता समावेश छ
कोष्ठक सँग नयाँ संस्करण छ जुन यसलाई ग्लोबल मेनूसँग अधिक अनुकूल बनाउँछ तर वेबमा काम गर्नको लागि अन्य चाखलाग्दो समाचार पनि ल्याउँदछ
Plex Media Server, उबन्टु र डेरिभेटिभमा स्नाप मार्फत स्थापना
यस लेखमा हामी प्लेक्सलाई हेर्नेछौं, यो मिडिया सर्भर हो जुन हामी उबन्टु र डेरिभेटिभहरूमा स्नाप प्याकेज मार्फत स्थापना गर्न सक्छौं।
वेबकोलग, डेस्कटपको लागि वेब अनुप्रयोगहरूको एक ठूलो क्याटलग
यो लेखमा हामी वेबकाटेलगलाई हेर्नेछौं। यस अनुप्रयोगले हामीलाई डेस्कटपबाट चल्नको लागि वेब अनुप्रयोगहरूको ठूलो सूची दिन्छ।
उबन्टु जान्न चाहन्छ कि तपाइँ उब्न्टु १ 18.04.०XNUMX मा कुन अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ
उबुन्टु यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी वितरण चाहान्छ। यसले हामीले प्रयोग गर्ने एप्लिकेसनहरू जस्ता पक्षहरूलाई सेलिishing्ग गर्दैछ र यसलाई उबन्टु १ 18.04.०XNUMX को लागि परिवर्तन गर्नेछ ...
GitKraken २.2.7, Git ग्राहक Ubuntu का लागि इलेक्ट्रोनको साथ बनेको छ
यस लेखमा हामी GitKraken मा एक नजर लिन जाँदैछन्। यो गिट ग्राहक हो जुन हाम्रो उबन्टु (x64) का लागि इलेक्ट्रोनको साथ बनेको छ।
उबुन्टु १..१० सँग आधिकारिक समर्थन छैन
उबुन्टु १..१० अब आधिकारिक रूपमा समर्थित छैन। गत अक्टोबरमा रिलिज गरिएको संस्करणसँग अब अपडेट छैन तर कार्य जारी रहनेछ
MPV, टर्मिनल को लागी भिडियो प्लेयर
यस लेखमा हामी MPV टर्मिनल को लागी भिडियो प्लेयर मा एक नजर लिन जाँदैछन्। हामी हेर्ने छौं कसरी उबन्टुमा साधारण तरीकाले स्थापना र स्थापना रद्द गर्ने।
उब्बन्टु १.17.04.०XNUMX मा SASS कसरी स्थापना गर्ने
हामी हाम्रो उबन्टु १.17.04.०XNUMX मा SASS स्थापना गर्न एउटा सानो ट्यूटोरियलको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। हाम्रो उबन्टुमा यो CSS प्रीप्रोसेसर हुने एउटा सरल तरिका ...
एनिमेशनमेकर, उबुन्टुबाट प्रस्तुतीकरण भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्
यस लेखमा हामी एनिमेसनमेकरलाई हेर्नेछौं। यो एक अनुप्रयोग हो जुन हामी उबन्टुमा सजिलै प्रस्तुतीकरण भिडियोहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं।
नयाँ स्काइप अनुप्रयोग उबन्टुमा समूह भिडियो कलहरू ल्याउँदछ
नयाँ स्काइप अनुप्रयोग उबन्टुको लागि अझै कार्यरत छ। नयाँ संस्करण नयाँ सुविधाहरूको साथ आउँदछ जस्तै समूह भिडियो कलिंग ...
आरएसएस गार्ड 3.4.1.१, नयाँ सुविधाहरूको साथ फिड रिडर
यस लेखमा हामी आरएसएस गार्ड कसरी स्थापना गर्ने भनेर हेर्न जाँदैछौं। यो उब्न्टु र लिनक्स टकसालको लागि फिड रिडर हल्का र सजीलो फिड हो।
नेक्सस पहिले नै युबीपोर्ट प्रोजेक्ट र यसका घटनाहरूसँग उपयुक्त छ
Nexus5अन्ततः UBPorts अपडेट प्राप्त गर्दछ। उनीहरूले हेलियम प्रोजेक्टमा वनप्लस and र .... को आगमनको पनि पुष्टि गरेका छन्।
DigiKam 5, Ubuntu / Linux Mint मा डिजिटल फोटो प्रबंधन
यस लेखमा हामी डिजिक्याम at लाई हेर्नेछौं। यो डिजिटल फोटो प्रबन्धक हो जुन उबन्टु र लिनक्स टकसालमा ठिकसँग काम गर्दछ।
जिनोमले स्न्याप प्याकेजहरू साना र अधिक कार्यशील बनाउँदछ
उबुन्टुले स्न्याप प्याकेजहरूमा कार्य गर्न जारी राख्यो। यी प्याकेजहरू जिनोम डेस्कटपमा आउँदैछन्। एक डेस्कटप जुन स्न्याप प्याकेजहरू द्वारा स्थापित गर्न सकिन्छ ...
उबुन्टु आर्टफुल आडवार्कलाई यसको समुदाय आवश्यक छ
उबुन्टु आर्टफुल आडवार्क उबन्टुको अर्को ठूलो संस्करण हुनेछ। एक संस्करण जुन धेरै परिवर्तनहरू समावेश गर्दछ तर साथै यसमा केहि ब्याकअपहरू छन् ...
टेक्समेकर .5.0.०, उबन्टु १.17.04.०XNUMX मा पिडिएफ दर्शकको साथ ल्याटेक्स सम्पादक
यस लेखमा हामी टेक्समेकरलाई हेर्नेछौं। एक पिडिएफ दर्शकको साथ एक ल्याटेक्स सम्पादक जुन हामी उबुन्टु १.17.04.०XNUMX वा उच्चमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
उबन्टुमा कसरी मोंगोडिबी स्थापना गर्ने
हामी तपाइँलाई कसरी उबन्टु एलटीएस मा मोंगोडीबी स्थापना गर्ने भन्ने बताउँछौं, एक धेरै शक्तिशाली र उपयोगी डेटाबेस जसले अन्यलाई MySQL वा MariaDB लाई बदल्न सक्दछ ...
Nautilus-svgresize, उबन्टुमा SVG छवि रिसाइज गर्नुहोस्
यस लेखमा हामी एक स्क्रिप्ट हेर्दैछौं जसलाई svgresize भनिन्छ जसको साथ हामी कुनै प्रयास बिना .svg छविहरू पुन: आकार दिन सक्दछौं।
यी केहि नयाँ सुविधाहरू हुन् जुन उबुन्टु बुड्गी १..१० मा हुनेछ
इकी डोहर्टीले बुड्गी डेस्कटपको नयाँ सुविधाहरूको बारेमा कुरा गरेको छ, नयाँ सुविधाहरू जुन उबुन्टु बडगी १..१० मा समावेश हुनेछ, नयाँ आधिकारिक स्वाद ...
LIVES २.2.8.7..XNUMX, उबन्टुको लागि एक सरल तर शक्तिशाली भिडियो सम्पादक
यस लेखमा हामी कसरी उबन्टुमा LIVES भिडियो सम्पादक २.2.8.7..XNUMX स्थापना गर्ने भनेर हेर्ने छौं। यो एक सरल तर शक्तिशाली सम्पादन अनुप्रयोग हो।
युनिटी of को पहिलो फोर्क अब उबुन्टु १.8.०16.04 को लागि उपलब्ध छ
युनिट, युनिटी the को पहिलो फोर्क, अब प्रयोग गर्न र उबन्टुमा स्थापना गर्न उपलब्ध छ, तर कुबन्टु वा उबन्टु मेटमा छैन, पुरानो पुस्तकालयहरूको कारणले।
GNS3, उबुन्टु को लागी एक वास्तविक र भर्चुअल नेटवर्क सिम्युलेटर
यस लेखमा हामी GNS3 नाम गरेको अनुप्रयोगमा एक नजर राख्नेछौं। यसको साथ तपाईं उबन्टुबाट परीक्षण गर्नको लागि एक नेटवर्क टोपोलजी सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।